Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/24 Desambra 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/24 Desambra 2013
арчманди (nitranga in-1) : Tonga hatrany amin'ny Twitter ilay sary izay nahatonga an'i Mardikor hanontany hoe [tj]:
Хамин аст “диёри арчманди мо”. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Ilanivato (nitranga in-1) : 15 500 no nahazo izany fanomezana Noely niarahana tamin'ny Star izany ka anisan'ireny ny Akany Avoko, ny Casa de Los Ninos Ilanivato, ny Akany NRJ, ny Akamasoa, Fikambanana Laka…
Nahazo ny anjarany tao anatin'izany ihany koa anefa ireo mpianatra avy amin'ny EPP dimy eto an-drenivohitra (Ivandry, Betongolo, Ankorondrano, Alarobia ary Ankadivato). (FETIN’NY NOELY-Zava-pisotro 11 000 tavoahangy ho an’ireo zaza sahirana)
mampahonena (nitranga in-1) : Tena mampahonena tanteraka. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Mardikor (nitranga in-1) : Tonga hatrany amin'ny Twitter ilay sary izay nahatonga an'i Mardikor hanontany hoe [tj]:
Sodiqov (nitranga in-1) : Mpanoratra Alexander Sodiqov · Nandika miora
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
tongatonga (nitranga in-1) : Efa drafitra napetrak' Andriamanitra mihitsy fa tsy tongatonga foana izany ary isaorana Azy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Petits (nitranga in-1) : hiatrika ny fifaninanana tenisy, «Les Petits AS de Tarbes», amin'ny 16 – 26 janoary 2014, hotontosaina any Frantsa, i Randy Randrianasoloson. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
ankamamian' (nitranga in-1) : Ny Mpitandrina Rakotomanana Jean Roussel
Nodidiana intelo sy tra-doza Dimy taona lasa izay dia tratry ny lozam-pifamoivoizana ihany koa ity mpitandrina ankamamian'ireo mpino Fjkm ity. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Hôtel (nitranga in-1) : Araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly tetsy amin'ny Hôtel Carlton Anosy, dia «maro tsy tambo isaina ireo porofo ananany mahakasika ny tsy fahatomombanan'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka, notanterahina ny zoma 20 desambra lasa teo». (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
Trangana pesta faharoa nahafaty olona tany Soanierana Ivongo ity niseho ity. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
nifamezivezy (nitranga in-1) : Fantatra ihany koa fa tsy vitsy ireo olona nifamezivezy teo amin'io toerana io nandritra ny fitifirana. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
nalevina (nitranga in-1) : Tany amin'ny fasana hitambarana kosa no nalevina izy. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
fahazazany (nitranga in-1) : Ny fivavahana rahateo no isan'ny nitaizany ireo zanany hatramin'ny fahazazany. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
distrikan' (nitranga in-2) : tafakatra 11 ankehitriny ireo maty, noho ny ahiahin'aretina pesta, any amin'ny distrikan'i Soanierana Ivongo. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
Soarano (nitranga in-1) : Tsy nandeha mihitsy anefa ny tsena tamin'ity, raha oharina ny tamin'ny taon-dasa”, hoy i Solofonirina Fitahiana, mpivarotra kilalao vita sinoa, etsy Soarano. (KILALAON’ANKIZY-Mandany hatramin’ny Ar 240 000 ny tokantrano iray)
facebook (nitranga in-3) : 2», loka lehibe avy amin' ilay fifaninanana saripika niarahana tamin'ny Telma, tao amin'ny pejy facebook. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
Henry (nitranga in-1) : andrasana ato ho ato ny mety hiafaran'i Thierry Henry, lohalaharana frantsay milalao any amin' ny New York Red Bulls. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
эхтиром (nitranga in-2) : Мо худамонро эхтиром накунем агар, ки моро эхтиром мекунад. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
zon' (nitranga in-2) : Toy ny mahazatra hatramin'izay amin'ny fanambaran'i Etazonia dia mitaky hatrany ny hampiharana ny zon'olombelona izy ireo. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
НАМЕРАСИД (nitranga in-1) : Ho valin'io lahatsoratra io dia nanoratra i Ruslan Ruslan [tj]:
ХАМИ РИДАНШОН НАМЕРАСИД ЭЭЭЭЭЭЭЭ ВОЯ Oohh, ny zavatra iray mba hany tsy nataony tamin'ilay saina dia ny [nangery] teo amboniny. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Global (nitranga in-1) : Miaraka amin'ny ampaham-panampian'ny vondrom-piarahamonin'ireo bilaogeran'ny Global Voices, fomba fijery maro avy amin'izao tontolo izao no hitantsika. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
nozaraina (nitranga in-1) : Mandritra izany, dia zava-pisotro 11 000 tavoahangy, na 7 000 litatra, no nozaraina ho an'ireo zaza sahirana tezaina sy beazina amin'ireo akany samihafa eto an-drenivohitra sy ny manodidina. (FETIN’NY NOELY-Zava-pisotro 11 000 tavoahangy ho an’ireo zaza sahirana)
nandaniany (nitranga in-1) : Isan'ireo faniriany amin' izao fotoana izao ny hiverina any amin'ny Arsenal, klioba nandaniany ny taona naha matihanina azy (1999 – 2007). (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
Bodovoahangy (nitranga in-1) : Ny 542 tamin'ireo no nifidy ny sarin'i Bodovoahangy Ony. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
Tajikistan (nitranga in-2) : Sary iray nahitàna sainam-pirenena Tajik natsipy tamin'ny tany sy nampiasaina ho solonà fandraofam-pako no niteraka korontana teo amin'ireo mpampiasa mediam-bahoaka tao Tajikistan. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
says (nitranga in-1) : “Nirotraka an-tsitrapo nanao azy io aho, fanapahan-kevitro araka izany ilay hiara-hiasa amin-dry zareo, saingy notakiako koa ny hanao asa izay tsy maintsy handraisako karama, izay mitaky traikefa ambony noho ny vao mianatra asa,” hoy i Morris says. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
Claude (nitranga in-1) : Ny talen'ny Sampan-draharaha miady amin'ny famotsiam-bola, Razaranaina Jean Claude no nanambara izany, omaly. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
Betongolo (nitranga in-1) : 15 500 no nahazo izany fanomezana Noely niarahana tamin'ny Star izany ka anisan'ireny ny Akany Avoko, ny Casa de Los Ninos Ilanivato, ny Akany NRJ, ny Akamasoa, Fikambanana Laka…
fitialana (nitranga in-1) : Mbola miandry ny fitialana feno avy amin'ny “Institut pasteur” anefa vao afaka manamarina tanteraka”, hoy kosa ny mpitsabo any an-toerana. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
hikabary (nitranga in-1) : Jereo anie raha tsy samy hikabary ka hitory fahendrena, toy ireny tena kristianina ireny, ireo heverintsika fa raiamandreny eto amin'ny firenena e. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
nampiasaina (nitranga in-2) : «Isan'izany ny fisiana biletà tokana misy marika mialoha nampiasaina tamin'ireo fifidianana ireo. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
fanànana (nitranga in-1) : Mirehareha fatratra ny amin'ny fanànana ny fihantonana saina avo indrindra maneran-tany ary mbola mieritreritra ny hanamonsana ny zava-bita tsara indrindra maneran-tany eo amin'ny halavan'ny saina. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
talen' (nitranga in-1) : Ny talen'ny Sampan-draharaha miady amin'ny famotsiam-bola, Razaranaina Jean Claude no nanambara izany, omaly. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
Muçulmana (nitranga in-1) : Ny Liga Desportivo Muçulmana, avy any Mozambika, no hihaona amin'izy ireo any Maputo amin'ny 7, 8, 9 febroary ho avy izao, mandritra ny lalao savaranonando. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
nanapaka (nitranga in-1) : «Niarahan'ny rehetra nanapaka ny tsy hanao fety fa hanomana ny fifaninanana afrikanina eo amin'ny baolina kitra», hoy i Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny Cnaps Sport, nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fandaharana ara-panatanjahantena, «Fou Sport», entanin'ny mpanao gazety ao amin'ny vondron-gazety L'Express de Madagascar, nandeha tamin'ny Radio Tana, omaly. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
fanajàna (nitranga in-1) : Nampakatra ambony ny sainam-pireneny ka nanadio azy no tokony nataon'ny tena olom-pirenena marina, ankoatry ny fanajàna ny saina, sy ny tanindrazana, ary ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
hoentina (nitranga in-1) : Misy ny paikady samihafa hoentina mampita izany ary nanampy ahy hatrany hiantsoroka izay adidy masina izay ny Baiboly», hoy izy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
higadona (nitranga in-1) : higadona rahampitso ny andron'ny Noely. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
nandevina (nitranga in-1) : «Nandeha fiara tsy mataho-dalana (4X4) izahay tamin'io fotoana io rehefa avy nandevina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
niarahana (nitranga in-2) : 2», loka lehibe avy amin' ilay fifaninanana saripika niarahana tamin'ny Telma, tao amin'ny pejy facebook. (FETIN’NY NOELY-Zava-pisotro 11 000 tavoahangy ho an’ireo zaza sahirana)
nahatongavan' (nitranga in-1) : Nambaran'ny mpitantana ny BOA Madagascar tamin'ny fotoana nahatongavan'ireo delegasiona fa «mbola handray anjara hatrany isika». (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
tompondakan' (nitranga in-6) : Efa niomana hatramin'ny ela io tompondakan'i Madagasikara nanao pao-droa io. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
Thierry (nitranga in-1) : andrasana ato ho ato ny mety hiafaran'i Thierry Henry, lohalaharana frantsay milalao any amin' ny New York Red Bulls. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
heverintsika (nitranga in-1) : Jereo anie raha tsy samy hikabary ka hitory fahendrena, toy ireny tena kristianina ireny, ireo heverintsika fa raiamandreny eto amin'ny firenena e. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
nampijaly (nitranga in-1) : na vao manomboka aza ny herinandro, dia nilaharana sady nampijaly ny fakàna vola teny amin'ireo milina fakana vola na ny DAB (Distri­buteurs Automatique de Billets) saika manerana ny banky teto an-drenivohitra. (DAB - BANKY-Sady nilaharana no nampijaly ny fakàna vola)
Ambohimailala (nitranga in-1) : hatramin'ny omaly dia nilaza ny teo anivon' ny Polisy misahana ny heloka bevava eny Anosy, izay miandraikitra ny famotorana mahakasika ny fatin'ireo olona telo hita teny Ambohimailala, fa « tsy mbola fantatra mihitsy ny marina na mbola velona any ilay tovovavy iray ahiana ho niaraka tamin'ireo olona telo namoy ny ainy ireo na tsia. (VONO OLONA TENY AMBOHIMAILALA-Tsy mbola nametraka fitoriana ny havan’ilay vehivavy tsy hita)
aleoko (nitranga in-1) : Noho izany dia aleoko mandeha any an-toeran-kafa», hoy ity jeneraly misotro ronono ity, izay isan'ny nanohana ny kandidà Jean Louis Robinson tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa notanterahina ny 20 desambra teo. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
adidy (nitranga in-4) : efa nisedra ny mafy saingy tsy niamboho adidy teo amin'ny fanatanterahana ny asa masina napetrak'Andriamanitra taminy ny pasitera, Rakotomanana Jean Roussel, mpitandrina etsy amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fkjm), Atsimon'i Mahamasina. (FIROSOANA AMIN’NY REPOBLIKA FAHA-IV-Manantena ny fahatongavan-tsain’ireo mpanao politika ny Vondrona Eoropeanina)
nanaovana (nitranga in-1) : Nisy soritr'aretina pesta ity lehilahy ity, ka nanaovana fitiliana avy hatrany. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
lefitry (nitranga in-1) : “Amin'ny alalan'ny haban-tsena, hetran-tany, haban'ny fiantsonana no ahafahana mampitombo ny tetibolan'ny fitantanana ny kaominina”, hoy Rasamimanana Olga, lefitry ny filohan'ny delegasionin'Antananarivo, omaly, nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Noely, ho an'ny mpiasan'ny Cua, tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina. (FITANTANANA NY RENIVOHITRA-Hampitombo ny fidiram-bolany ny kaominina Antananarivo)
Fiara (nitranga in-1) : Fiara Mercedes Sprinter no nentin'ilay Sinoa tamin'io fotoana io. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
Tsenabe (nitranga in-1) : Tsy mba mividy kilalao ho azy ireo mantsy izahay, raha tsy amin'ny fotoana toy izao”, hoy i Sylvana Fleurys, renim-pianakaviana, nividy kilalao ho an'ny zanany, tetsy amin'ny Tsenabe Noely, eny Mahamasina, omaly. (KILALAON’ANKIZY-Mandany hatramin’ny Ar 240 000 ny tokantrano iray)
Star (nitranga in-3) : efa ho herinandro izao no manotrona sy manome aina ireo fetin' ny Noely samihafa ny orinasa Star. (FETIN’NY NOELY-Zava-pisotro 11 000 tavoahangy ho an’ireo zaza sahirana)
hiverenany (nitranga in-1) : Ny sokajy zandriny kosa dia hoezahina ny hiverenany indray eo amin'ny vondrona 1A mba hahatanteraka ny fikasantsika hampiantrano ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny sokajy Junior amin'ny taona 2015. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
distrika (nitranga in-1) : “Efa narary io lehilahy io no noentin'ny fianakaviany teto amin'ny hopitalin'ny distrika (Chd) eto Soanierana. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
handraisantsika (nitranga in-1) : Ankoatra izany dia isan' ireo fifaninanana iraisam-pirenena handraisantsika anjara ihany koa ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ao anaty efitrano, hatao any Pologne, amin' ny 9 marsa ho avy izao. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
hiverenana (nitranga in-1) : Na izany aza, tsy hohadinoina ary hiverenana ihany koa ireo hira efa nahafantarana an'i Samoëla taloha ary efa narafitra tao anaty rakikira samihafa toy ny «Kalakely», «Kôfa tia», «Razily», «Poteau be»…
Tsiahivina fa nirona kokoa amin'ny akaostika i Samoëla ao anatin'ity rakikira vaovao ity ary miresaka fitiavana sy ny tranga hita amin'ny fiainana andavanandro ny tononkira. (SEHO FARANY-Hanatosaka ny «maha-domelina» indray i Samoëla)
Kambodziana (nitranga in-1) : Ambaran'i Morris fa takany ny antony tsy nanomezan'ilay fikambanana Kambodziana vola azy — izy irery no hany vahiny tao, ary tsy vitan-dry zareo ny handoa ny karamany — saingy heveriny fa ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ao Londona kosa dia nàka tombony fotsiny tamin'ny hamaozatry ny tsenan'ny asa ary nanome asa ho azy, izay asa tokony hataon'olona mandray karama. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
haintsika (nitranga in-1) : Asa aloha raha tena haintsika sy tena nampitaina marina tamintsika ny foto-kevitra sy toe-panahy tokony hananan'izany kristianina izany. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
nahatafakatra (nitranga in-1) : Ny laharana fahasivy nisy antsika, nandritra ny dingan'ny fifanintsanana teo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika, tany Botsoana, tamin'ny taona 2012, no tsy nahatafakatra antsika hiatrika izany tamin'ity taona ity. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
telon' (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 1992 no naseho tamin'ny fomba ofisialy ny loko telon'ny sainam-pirenen'i Tajikistan. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Olga (nitranga in-1) : “Amin'ny alalan'ny haban-tsena, hetran-tany, haban'ny fiantsonana no ahafahana mampitombo ny tetibolan'ny fitantanana ny kaominina”, hoy Rasamimanana Olga, lefitry ny filohan'ny delegasionin'Antananarivo, omaly, nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Noely, ho an'ny mpiasan'ny Cua, tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina. (FITANTANANA NY RENIVOHITRA-Hampitombo ny fidiram-bolany ny kaominina Antananarivo)
nampivady (nitranga in-1) : Isika niezaka nampivady ny finoan-drazana sy ny finoana kristianina, kanefa na ny voalohany na ny faharoa dia efa samy nohitsakitsahintsika tanteraka. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
tampo (nitranga in-1) : Io reniny izay efa nodimandry io no nanafatra ny rainy hitaiza azy sy ireo mpiray tampo aminy tamin'ny fomba kristianina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
hanamonsana (nitranga in-1) : Mirehareha fatratra ny amin'ny fanànana ny fihantonana saina avo indrindra maneran-tany ary mbola mieritreritra ny hanamonsana ny zava-bita tsara indrindra maneran-tany eo amin'ny halavan'ny saina. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
nahafantarana (nitranga in-1) : Na izany aza, tsy hohadinoina ary hiverenana ihany koa ireo hira efa nahafantarana an'i Samoëla taloha ary efa narafitra tao anaty rakikira samihafa toy ny «Kalakely», «Kôfa tia», «Razily», «Poteau be»…
Atallah (nitranga in-2) : Nambaran'i Béatrice Atallah, filohan'ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin'ny tetezamita (Cenit) fa tamin'ity indray mitoraka ity dia haingana kokoa tsy toy ny teo aloha ny fanangonana ireo voka-pifidianana. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
fanitsakitsahana (nitranga in-1) : Nahatsiaro tena ho voateny ratsy mihitsy ireo mpampiasa aterineto rehefa nahita ny fanitsakitsahana ny hasin'ny sainam-pirenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
1992 (nitranga in-1) : Tamin'ny taona 1992 no naseho tamin'ny fomba ofisialy ny loko telon'ny sainam-pirenen'i Tajikistan. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
hotontosaina (nitranga in-3) : hiatrika ny fifaninanana tenisy, «Les Petits AS de Tarbes», amin'ny 16 – 26 janoary 2014, hotontosaina any Frantsa, i Randy Randrianasoloson. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
tsaratsara (nitranga in-1) : Kanefa, bilaogera maro no nanoso-kevitra fa tokony hovaina ny sainam-pirenena sy ny famantarana nasionaly mba hitarafana tsaratsara kokoa ny fiovan-toetran'ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Ambondrona (nitranga in-1) : “Tsentsina avokoa na ireo lalana tsy dia be mpampiasa toy ny eny Ambondrona sy Faravohitra aza. (FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA-Karazan-dalana vitsy sisa no malaladalaka azo aleha)
Rakotomanana (nitranga in-6) : efa nisedra ny mafy saingy tsy niamboho adidy teo amin'ny fanatanterahana ny asa masina napetrak'Andriamanitra taminy ny pasitera, Rakotomanana Jean Roussel, mpitandrina etsy amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fkjm), Atsimon'i Mahamasina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Londres (nitranga in-1) : Isan'ny tanjon'ny federasiona ihany koa amin'io taona vaovao io ny hikatsaka tapakila hahafahan' ny Makis hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany, hatao any Londres amin'ny 2015, amin'ny alalan'ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika, amin'ny volana jolay 2014 eto Madagasikara. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
Orchestra (nitranga in-1) : Ny tsy azo lavina kosa anefa, saika efa niomana foana amin'ny fanafanana ny fetin'ny faran'ny taona toy izao ireo orkesitra samihafa ka santionany amin' ireny ny Ambin'ts Orchestra sy ny Melodihy. (HERINANDRO MIALOHA-Mbola mangingina ireo hetsika hamaranana ny taona)
nalay (nitranga in-1) : Sary nalain'i Ahrullo Dadaboev, efa nahazoana alalana. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Bodo­voahangy (nitranga in-2) : Lasan'i Bodo­voahangy Ony ny «Tablette One tba 7. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
nàka (nitranga in-1) : Ambaran'i Morris fa takany ny antony tsy nanomezan'ilay fikambanana Kambodziana vola azy — izy irery no hany vahiny tao, ary tsy vitan-dry zareo ny handoa ny karamany — saingy heveriny fa ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ao Londona kosa dia nàka tombony fotsiny tamin'ny hamaozatry ny tsenan'ny asa ary nanome asa ho azy, izay asa tokony hataon'olona mandray karama. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
hampihenana (nitranga in-1) : Samy mba mitady hevitra hampihenana izany fatiantoka izany ireo mivelona amin'ny fampiasana lalana. (FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA-Karazan-dalana vitsy sisa no malaladalaka azo aleha)
моро (nitranga in-1) : Мо худамонро эхтиром накунем агар, ки моро эхтиром мекунад. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
hahatratra (nitranga in-1) : Na izany aza, samia hahatratra ny andro raham-pitso, dia manaova fety sambatra daholo e. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
delegasiony (nitranga in-1) : “Amin'ny alalan'ny haban-tsena, hetran-tany, haban'ny fiantsonana no ahafahana mampitombo ny tetibolan'ny fitantanana ny kaominina”, hoy Rasamimanana Olga, lefitry ny filohan'ny delegasionin'Antananarivo, omaly, nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Noely, ho an'ny mpiasan'ny Cua, tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina. (FITANTANANA NY RENIVOHITRA-Hampitombo ny fidiram-bolany ny kaominina Antananarivo)
hitaterana (nitranga in-1) : I Ahrullo Dadaboev, ilay olona naka ny sary ka nandefa izany tany amin'ny Facebook, no nilaza fa mpamafa làlana iray no nampiasa ilay saina mba hitaterana fako tao Khujand, tanàna iray any Atsimon'ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Louis (nitranga in-4) : Noho izany dia aleoko mandeha any an-toeran-kafa», hoy ity jeneraly misotro ronono ity, izay isan'ny nanohana ny kandidà Jean Louis Robinson tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa notanterahina ny 20 desambra teo. (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
nanoratra (nitranga in-1) : Ho valin'io lahatsoratra io dia nanoratra i Ruslan Ruslan [tj]:
StumbleUpon (nitranga in-2) : Mpanoratra Alexander Sodiqov · Nandika miora
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
alavonkona (nitranga in-1) : tafiditra amin'ireo fanomezana alavonkona ho fiatrehana ny fetin'ny Noely. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
mitàna (nitranga in-1) : Ny fanomezanao fotoana ho anà zavatra iray mitàna anao am-po dia mety faran'izay hahafa-po sy hitondra tombony. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
hitaiza (nitranga in-1) : Io reniny izay efa nodimandry io no nanafatra ny rainy hitaiza azy sy ireo mpiray tampo aminy tamin'ny fomba kristianina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Rasamimanana (nitranga in-1) : “Amin'ny alalan'ny haban-tsena, hetran-tany, haban'ny fiantsonana no ahafahana mampitombo ny tetibolan'ny fitantanana ny kaominina”, hoy Rasamimanana Olga, lefitry ny filohan'ny delegasionin'Antananarivo, omaly, nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Noely, ho an'ny mpiasan'ny Cua, tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina. (FITANTANANA NY RENIVOHITRA-Hampitombo ny fidiram-bolany ny kaominina Antananarivo)
hodia­vinao (nitranga in-1) : Tsy moramora ny mampahafantatra azy ireo hoe diso lalana ianao ary ity no lalana tokony hodia­vinao. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Emomaly (nitranga in-1) : — Бачаи Сако (@BachaiSako) December 17, 2013
@mardikor Vao haingana aho no nahita vondronà atleta tanora tao Ayni [tanàna lehibe iray ao Atsimon'i Tajikistan] nanao kilaoty vita tamin'ny ilany havia amin'ny sainam-pirenena, taorian'ny fitsidihan'ny [Filoha Emomali Rahmon]. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
naratra (nitranga in-1) : Nisy ny aina nafoy sy ny olona naratra vokatr'io loza io. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
РИДАНШОН (nitranga in-1) : Ho valin'io lahatsoratra io dia nanoratra i Ruslan Ruslan [tj]:
hihaona (nitranga in-1) : Ny Liga Desportivo Muçulmana, avy any Mozambika, no hihaona amin'izy ireo any Maputo amin'ny 7, 8, 9 febroary ho avy izao, mandritra ny lalao savaranonando. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
fanambaràn' (nitranga in-1) : Araka ny voalaza dia nanao ny fisavana ireo mpitandro ny filaminana tany an-toerana raha nahare ny fanambaràn'ireo olon-tsotra mikasika ity halatra hazo sarobidy ity. (VAROMAIZINA-Bolabolana andramena 449 tratra tao anaty kamiao efatra)
Paska (nitranga in-1) : Mampanongo tena ny mandaha-teny amin'ity hoe “araka ny fomba malagasy”…
Tonga ny Paska, dia isika no tena masina. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
Pologne (nitranga in-1) : Ankoatra izany dia isan' ireo fifaninanana iraisam-pirenena handraisantsika anjara ihany koa ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ao anaty efitrano, hatao any Pologne, amin' ny 9 marsa ho avy izao. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
fijorona (nitranga in-1) : «Tsy afaka tonga dia mandray be fahatany ireny filazan'ny olona ireny izahay fa manao famotorana lalina vao afaka milaza na mitombina na tsia ilay fijorona vavolombelona. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
Marcel (nitranga in-1) : «Hiatrika ny Can hatao any Maraoka ny Makis vehivavy, amin' ny taona 2014», hoy i Marcel Rakotomalala, filohan'ny federasiona malagasin'ny baolina lavalava nandritra ny fizarana fano-mezana Krismasy ho an' ireo ekipam-pirenena malagasy, omaly, teny Ankorondrano. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
Makis (nitranga in-3) : hanam-bintana hiatrika fifaninanana afrikanina ny Makis vehivavy
Rehefa niato tao anatin'ny taona maromaro ny fandraisana anjarantsika teo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika ho an'ny rugby vehivavy dia hiverina indray izany amin' ny taona 2014. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
Radio (nitranga in-1) : «Niarahan'ny rehetra nanapaka ny tsy hanao fety fa hanomana ny fifaninanana afrikanina eo amin'ny baolina kitra», hoy i Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny Cnaps Sport, nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fandaharana ara-panatanjahantena, «Fou Sport», entanin'ny mpanao gazety ao amin'ny vondron-gazety L'Express de Madagascar, nandeha tamin'ny Radio Tana, omaly. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
renivohitry (nitranga in-1) : Manakaiky renivohitra
20 km miala ny renivohitry ny distrikan'i Soanierana Ivongo no monina io lehilahy io, raha ny vaovao voaray hatrany. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
nohevery (nitranga in-1) : Fety manan-danja ho an'ny kristianina satria fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ilay noheverin'izy ireo fa Mpamonjy. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
tenantsika (nitranga in-1) : com/J798HR27xB
— Хайрхоҳ (@khairkhoh) December 17, 2013 Oh, Allah, ohh… Raha isika aza tsy manaja ny tenantsika, iza indray no andrasantsika hanaja antsika eo. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
hividianana (nitranga in-2) : Tsy ataon'ny tokantrano ambanin-javatra, amin'izao fetin'ny Noely izao, ny tetibola hividianana kilalao ho an'ny ankizy. (KILALAON’ANKIZY-Mandany hatramin’ny Ar 240 000 ny tokantrano iray)
мекунад (nitranga in-1) : Мо худамонро эхтиром накунем агар, ки моро эхтиром мекунад. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
hifety (nitranga in-1) : Nanamafy izany koa i Mia, nilaza fa «hiaraka hifety amin'ny fianakaviana amin'ity taona ity raha niatrika seho goavana tamin'ny taon-dasa». (HERINANDRO MIALOHA-Mbola mangingina ireo hetsika hamaranana ny taona)
мебошад (nitranga in-1) : Niteny i Ozod Orzuyev fa [tj]:
Ин хузновар мебошад. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
lava (nitranga in-2) : Tao anatin'io fotoana lava dia lava nitantanany ny fiangonana Fjkm Atsimon'i Mahamasina io ihany koa izy no namoy ny rainy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
hatrehantsika (nitranga in-1) : Ny tena hetsika lehibe iraisam-pirenena hatrehantsika ny Lalao Olympika ho an'ny tanora (JOJ), hotontosaina any Nanjing (Chine) amin'ny 16 – 28 aogositra. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
Ozod (nitranga in-1) : Niteny i Ozod Orzuyev fa [tj]:
niasa (nitranga in-2) : «Ny fandidiana roa farany tamin'ireo dia natao tany Frantsa ary soa ihany fa ny zanakay dia efa nipetraka sy niasa maharitra tany an-toerana tamin'io fotoana nitsaboana ahy io. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
hitondrany (nitranga in-1) : Mandritra izany seho izany no hitondrany indray ireo hira 10 ao anatin'ity rakikira ity raha tsy hitanisa afa-tsy ny «Fitiavana malaza» sy ny «Fitondrana mahavoa». (SEHO FARANY-Hanatosaka ny «maha-domelina» indray i Samoëla)
nampitaina (nitranga in-1) : Asa aloha raha tena haintsika sy tena nampitaina marina tamintsika ny foto-kevitra sy toe-panahy tokony hananan'izany kristianina izany. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
zanakay (nitranga in-2) : «Enina mianadahy ny zanakay, telo lahy sy telo vavy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
2015 (nitranga in-2) : Isan'ny tanjon'ny federasiona ihany koa amin'io taona vaovao io ny hikatsaka tapakila hahafahan' ny Makis hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany, hatao any Londres amin'ny 2015, amin'ny alalan'ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika, amin'ny volana jolay 2014 eto Madagasikara. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
Nanana (nitranga in-1) : Ny Mpitandrina Jean Roussel sy ny vadiny taorian'ny fahavitan'ny fanambadian'izy ireo
Paikady masina Nanana fomba fiasa hafa kely ity mpitandrina ity teo amin'ny fiahiana ny fanahin'ireo mpivavaka ao aminy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
vitan' (nitranga in-1) : Ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsy vitan'ny fifaliana fa tsy maintsy zakaina ihany koa kapoaka mangidy amin'ny maha olombelona ny tena», hoy ny mpitandrina, Jean Roussel Rakotomanana. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
2013 (nitranga in-10) : Ireo nandeha nisotro ronono tamin'ity taona 2013 ity kosa, izay miisa 23, dia nomena bodofotsy sy vovoka bisky. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
2012 (nitranga in-2) : FR
Tahirin-tsary famaranana ny taona 2012 sy ny fitsenana ny taona 2013. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
худамонро (nitranga in-1) : Мо худамонро эхтиром накунем агар, ки моро эхтиром мекунад. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
fiatrehana (nitranga in-3) : tafiditra amin'ireo fanomezana alavonkona ho fiatrehana ny fetin'ny Noely. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
nahemotra (nitranga in-1) : Avy ao aoriana ilay vadiny no manoro lalana ilay Sinoa satria nahemotra ilay fiaran'izy ireo. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
hiazo (nitranga in-1) : nanapa-kevitra ny hamonjy fodiana hiala sasatra kely any ambanivohitr'i Toliara ny jeneraly Camille Vital rehefa nosakanana tsy afaka hiazo ny nosy Maorisy, ny sabotsy lasa teo. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
maninjitra (nitranga in-1) : 39 taona maninjitra izay no nitandremany teo anivon'io fiangonana Fjkm etsy Mahamasina io. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
nanosika (nitranga in-1) : Tamin'ny izahay nipetraka tany Mananjary no nahatsapako ny antson'Andriamanitra izay nanosika ahy hanao ny asa fanompoana an'Andriamanitra. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
RANDRIANJA (nitranga in-1) : SARY SY SORATRA: JULIANO RANDRIANJA. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
mampahafantatra (nitranga in-1) : Tsy moramora ny mampahafantatra azy ireo hoe diso lalana ianao ary ity no lalana tokony hodia­vinao. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
natsipy (nitranga in-1) : Sary iray nahitàna sainam-pirenena Tajik natsipy tamin'ny tany sy nampiasaina ho solonà fandraofam-pako no niteraka korontana teo amin'ireo mpampiasa mediam-bahoaka tao Tajikistan. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
nilaharana (nitranga in-1) : na vao manomboka aza ny herinandro, dia nilaharana sady nampijaly ny fakàna vola teny amin'ireo milina fakana vola na ny DAB (Distri­buteurs Automatique de Billets) saika manerana ny banky teto an-drenivohitra. (DAB - BANKY-Sady nilaharana no nampijaly ny fakàna vola)
azon' (nitranga in-1) : Ankoatra ny «tab­lette», dia fanampin'ny loka azon'ity mpandray anjara ity ihany koa ny fandehanana maka sary miaraka amin'ny «Oxygeniuz», ny kojakoja fanaingoana avy amin'ny ABC Cons­truction, fitaizam-batana ao amin'ny Centre Kintana ary fikarakarana bika aman'endrika miaraka amin'ny Annick Beauté. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
lazay (nitranga in-1) : Kanefa tsy misy azo hamaivanina na iray aza izay lazain'ny olona tonga ao aminay. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
Honoré (nitranga in-1) : Tamin'ireo kandidà 13 nifaninana dia mihoatra ny 60% ny vato azon-dRasolonjatovo Honoré na Papa Solo. (Tapany)
nisakanana (nitranga in-2) : «Hatreto aloha dia mbola tsy mahalala izay tena antony nisakanana ahy tsy ho any amin'io firenena io ny tenako. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
nahatsapako (nitranga in-1) : Tamin'ny izahay nipetraka tany Mananjary no nahatsapako ny antson'Andriamanitra izay nanosika ahy hanao ny asa fanompoana an'Andriamanitra. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
tapakila (nitranga in-1) : Isan'ny tanjon'ny federasiona ihany koa amin'io taona vaovao io ny hikatsaka tapakila hahafahan' ny Makis hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany, hatao any Londres amin'ny 2015, amin'ny alalan'ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika, amin'ny volana jolay 2014 eto Madagasikara. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
aleo (nitranga in-2) : «Noho ny fisian'ny fifidianana sy ny tsy fahafantarana izay mety ho akony sy ny vokany dia aleo tsy nanomana mihitsy sao dia ho very vola eo», araka ny fanazavan'i Luc Hervé avy amin'ny LH Pro, izay efa fantatra amin'ny fikarakarana hetsika faran'ny taona. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
Café (nitranga in-1) : Mbola hanatosaka indray ny «maha-domelina» i Samoëla amin'ny seho takariva izay atolony, etsy amin'ny Piment Café Behoririka, ny zoma 27 desambra izao, manomboka amin'ny 9 ora alina. (SEHO FARANY-Hanatosaka ny «maha-domelina» indray i Samoëla)
tratry (nitranga in-1) : Ny Mpitandrina Rakotomanana Jean Roussel
Rasoanaivo (nitranga in-3) : «Niarahan'ny rehetra nanapaka ny tsy hanao fety fa hanomana ny fifaninanana afrikanina eo amin'ny baolina kitra», hoy i Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny Cnaps Sport, nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fandaharana ara-panatanjahantena, «Fou Sport», entanin'ny mpanao gazety ao amin'ny vondron-gazety L'Express de Madagascar, nandeha tamin'ny Radio Tana, omaly. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
Sport (nitranga in-1) : «Niarahan'ny rehetra nanapaka ny tsy hanao fety fa hanomana ny fifaninanana afrikanina eo amin'ny baolina kitra», hoy i Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny Cnaps Sport, nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fandaharana ara-panatanjahantena, «Fou Sport», entanin'ny mpanao gazety ao amin'ny vondron-gazety L'Express de Madagascar, nandeha tamin'ny Radio Tana, omaly. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
Benony (nitranga in-1) : “Any amin'ny Boulevard de l'Europe, 67ha sy Andavamamba ihany sisa no tsy dia ahitana fitohanana firy”, hoy i Benony Laza, lehiben'ny sampan-draharaha ao amin'ny Ddu. (FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA-Karazan-dalana vitsy sisa no malaladalaka azo aleha)
Capogrosso (nitranga in-1) : Tamin'ny janoary 2013 dia nahadingana ireo fihodinana roa voalohany i Randy saingy teo amin'ny dingan'ny famaranana no nahintsan'ilay tera-tany italianina, Arianne Capogrosso, tamin'ny seta roa. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
nanambara (nitranga in-1) : Ny talen'ny Sampan-draharaha miady amin'ny famotsiam-bola, Razaranaina Jean Claude no nanambara izany, omaly. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
Trangana (nitranga in-1) : Miangaly Ralitera
manaova (nitranga in-1) : Na izany aza, samia hahatratra ny andro raham-pitso, dia manaova fety sambatra daholo e. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
Isaky (nitranga in-1) : Isaky ny maneno ny lakolosim-piangonana mana­kaiky ny trano nipetrahanay dia taitra foana ny tenako ary nanatona moramora niresaka ny mpitandrina teo anivon'ny Fiangonana Fjkm tany an-toerana», araka ny fitantarany. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
mipoapoaka (nitranga in-1) : isan-taona, efa mipoapoaka amin'ny haino aman-jery samihafa amin'ny vanim-potoana toy izao ireo dokam-barotra momba ireo hetsika faran'ny taona. (HERINANDRO MIALOHA-Mbola mangingina ireo hetsika hamaranana ny taona)
накунем (nitranga in-1) : Мо худамонро эхтиром накунем агар, ки моро эхтиром мекунад. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Tiako (nitranga in-1) : Tiako homarihina anefa fa tsy kivy tamin'ny fisedrana ireo olana ireo mihitsy izahay mivady ary vao mainka aza nankahery anay hanohy ny asan'ny Tompo izany», hoy ihany izy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Junior (nitranga in-1) : Ny sokajy zandriny kosa dia hoezahina ny hiverenany indray eo amin'ny vondrona 1A mba hahatanteraka ny fikasantsika hampiantrano ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny sokajy Junior amin'ny taona 2015. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
homarihina (nitranga in-1) : Tiako homarihina anefa fa tsy kivy tamin'ny fisedrana ireo olana ireo mihitsy izahay mivady ary vao mainka aza nankahery anay hanohy ny asan'ny Tompo izany», hoy ihany izy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Automatique (nitranga in-1) : na vao manomboka aza ny herinandro, dia nilaharana sady nampijaly ny fakàna vola teny amin'ireo milina fakana vola na ny DAB (Distri­buteurs Automatique de Billets) saika manerana ny banky teto an-drenivohitra. (DAB - BANKY-Sady nilaharana no nampijaly ny fakàna vola)
tenany (nitranga in-2) : Efa mpitantana skoto tany an-toerana ny tenany ary moramora ho azy ny niampita tany amin'ny asa fanompoana an' Andriamanitra. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
dingan' (nitranga in-4) : Tamin'ny janoary 2013 dia nahadingana ireo fihodinana roa voalohany i Randy saingy teo amin'ny dingan'ny famaranana no nahintsan'ilay tera-tany italianina, Arianne Capogrosso, tamin'ny seta roa. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
nahita (nitranga in-2) : Nahatsiaro tena ho voateny ratsy mihitsy ireo mpampiasa aterineto rehefa nahita ny fanitsakitsahana ny hasin'ny sainam-pirenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Miezaka hanafaingana ny famoahana ny voka-pifidianana ny Cenit. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
tanàna (nitranga in-1) : I Ahrullo Dadaboev, ilay olona naka ny sary ka nandefa izany tany amin'ny Facebook, no nilaza fa mpamafa làlana iray no nampiasa ilay saina mba hitaterana fako tao Khujand, tanàna iray any Atsimon'ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Mampanongo (nitranga in-1) : Mampanongo tena ny mandaha-teny amin'ity hoe “araka ny fomba malagasy”…
nahaterahan' (nitranga in-2) : Fety manan-danja ho an'ny kristianina satria fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ilay noheverin'izy ireo fa Mpamonjy. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
Arsenal (nitranga in-2) : Isan'ireo faniriany amin' izao fotoana izao ny hiverina any amin'ny Arsenal, klioba nandaniany ny taona naha matihanina azy (1999 – 2007). (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
Olympika (nitranga in-1) : Ny tena hetsika lehibe iraisam-pirenena hatrehantsika ny Lalao Olympika ho an'ny tanora (JOJ), hotontosaina any Nanjing (Chine) amin'ny 16 – 28 aogositra. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
Cenit (nitranga in-4) : Na dia izany aza dia aleo aloha hianoka tanteraka ao anatin'ny fetin'ny faran'ny taona ny Malagasy ka tokony ho any amin'ny voalohandohan'ny volana janoary 2014 any ho any no hamoahan'ny Cenit ny voka-pifidianana vonjimaika momba io fifidianana io», hoy izy tetsy amin'ny birao foiben'ny Cenit, Alarobia, omaly hariva. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
kaomandy (nitranga in-1) : Lehilahy iray 37 taona, mponina ao amin'ny kaominina Fotsialalana mantsy, no namoy ny ainy ny alakamisy 19 desambra lasa teo, araka ny fanambaran'ny kaomandin'ny zandarimariam-pirenena any an-toerana. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
nankany (nitranga in-1) : Nisy olona tsara sitrapo nilaza tany amin'ny zandary nitatitra fa misy an- dramena nentin'ny kamiao nankany Antalaha. (VAROMAIZINA-Bolabolana andramena 449 tratra tao anaty kamiao efatra)
Rakotomalala (nitranga in-1) : «Hiatrika ny Can hatao any Maraoka ny Makis vehivavy, amin' ny taona 2014», hoy i Marcel Rakotomalala, filohan'ny federasiona malagasin'ny baolina lavalava nandritra ny fizarana fano-mezana Krismasy ho an' ireo ekipam-pirenena malagasy, omaly, teny Ankorondrano. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
Rasoarinoro (nitranga in-1) : «Ny an'ny tena ihany ity no ananana loza satria karama raisina no efa nilaharako teto efa ho adiny telo izao», hoy Rasoarinoro Julienne. (DAB - BANKY-Sady nilaharana no nampijaly ny fakàna vola)
ananany (nitranga in-1) : Araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly tetsy amin'ny Hôtel Carlton Anosy, dia «maro tsy tambo isaina ireo porofo ananany mahakasika ny tsy fahatomombanan'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka, notanterahina ny zoma 20 desambra lasa teo». (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
mifanalavitra (nitranga in-1) : Tsy hita ho dia mifanalavitra loatra ny toe-batana noho ny fitahian'Andriamanitra», hoy izy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
faramparan' (nitranga in-1) : «Raha izao firoson'ny asa izao no dinihina dia tokony ho tratra amin'ny faramparan'ity volana ity ny voka-pifidianana ho an'ny filoham-pirenena. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
delicious (nitranga in-2) : Mpanoratra Alexander Sodiqov · Nandika miora
lohalaharana (nitranga in-1) : andrasana ato ho ato ny mety hiafaran'i Thierry Henry, lohalaharana frantsay milalao any amin' ny New York Red Bulls. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
Nosiavina (nitranga in-1) : Tamin'ny 21 desambra lasa teo, araka ny tatitra azo, no tra-tehaky ny zandary tao anaty fiara vaventy efatra tany Nosiavina Sambava ireo bolabolana andramena miisa 449. (VAROMAIZINA-Bolabolana andramena 449 tratra tao anaty kamiao efatra)
Centre (nitranga in-1) : Ankoatra ny «tab­lette», dia fanampin'ny loka azon'ity mpandray anjara ity ihany koa ny fandehanana maka sary miaraka amin'ny «Oxygeniuz», ny kojakoja fanaingoana avy amin'ny ABC Cons­truction, fitaizam-batana ao amin'ny Centre Kintana ary fikarakarana bika aman'endrika miaraka amin'ny Annick Beauté. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
nitsaboana (nitranga in-1) : «Ny fandidiana roa farany tamin'ireo dia natao tany Frantsa ary soa ihany fa ny zanakay dia efa nipetraka sy niasa maharitra tany an-toerana tamin'io fotoana nitsaboana ahy io. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Piment (nitranga in-1) : Mbola hanatosaka indray ny «maha-domelina» i Samoëla amin'ny seho takariva izay atolony, etsy amin'ny Piment Café Behoririka, ny zoma 27 desambra izao, manomboka amin'ny 9 ora alina. (SEHO FARANY-Hanatosaka ny «maha-domelina» indray i Samoëla)
bilaogeran' (nitranga in-1) : Miaraka amin'ny ampaham-panampian'ny vondrom-piarahamonin'ireo bilaogeran'ny Global Voices, fomba fijery maro avy amin'izao tontolo izao no hitantsika. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
tsenan' (nitranga in-3) : Ankoatra ny tsenan'ny Noely, dia manamafy ny fitohanan'ny fifamoivoizana ihany koa, ny fanamboaran-dalana, toy ny etsy Ambanidia. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
nahazoana (nitranga in-1) : Sary nalain'i Ahrullo Dadaboev, efa nahazoana alalana. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
zanany (nitranga in-2) : Tsy mba mividy kilalao ho azy ireo mantsy izahay, raha tsy amin'ny fotoana toy izao”, hoy i Sylvana Fleurys, renim-pianakaviana, nividy kilalao ho an'ny zanany, tetsy amin'ny Tsenabe Noely, eny Mahamasina, omaly. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Alexander (nitranga in-1) : Mpanoratra Alexander Sodiqov · Nandika miora
hahatanteraka (nitranga in-1) : Ny sokajy zandriny kosa dia hoezahina ny hiverenany indray eo amin'ny vondrona 1A mba hahatanteraka ny fikasantsika hampiantrano ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny sokajy Junior amin'ny taona 2015. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
Gambia (nitranga in-1) : Toy ny fanazavan'i Demba Kandeh, mpiasa mpirotsaka an-tsitrapo ao Gambia, “Zava-mahafinaritra ny firotsahana an-tsitrapo. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
fifanintsanana (nitranga in-4) : Io fifaninanana any Tarbes io no hanokafany ny fifaninanana amin'ny taona 2014, ka tsy ahafahany miatrika ny dingan'ny fifanintsanana eo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika tapany atsimo atao any Botsoana amin'ny 5 – 12 janoary ho avy izao. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
Nozaraina (nitranga in-1) : Nozaraina kilalao, vatomamy sy bisky ny zanaky ny mpiasa miisa 1 300 nandritra izany. (FITANTANANA NY RENIVOHITRA-Hampitombo ny fidiram-bolany ny kaominina Antananarivo)
fakàna (nitranga in-1) : na vao manomboka aza ny herinandro, dia nilaharana sady nampijaly ny fakàna vola teny amin'ireo milina fakana vola na ny DAB (Distri­buteurs Automatique de Billets) saika manerana ny banky teto an-drenivohitra. (DAB - BANKY-Sady nilaharana no nampijaly ny fakàna vola)
notakiako (nitranga in-1) : “Nirotraka an-tsitrapo nanao azy io aho, fanapahan-kevitro araka izany ilay hiara-hiasa amin-dry zareo, saingy notakiako koa ny hanao asa izay tsy maintsy handraisako karama, izay mitaky traikefa ambony noho ny vao mianatra asa,” hoy i Morris says. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
hamerenana (nitranga in-1) : « Manainga ny lafin-kery voakasika rehetra izahay hiara-hientana hamerenana ny fanjakana tan-dalàna, hiantoka ny fampiharana ireo zon'olombelona fototra ary hiara-hiasa ao anatin'ny fampihavanana mba hamerenena amin'ny laoniny ny fiainana politika sy ny fahasalaman'ny toekaren'ny firenena», hoy ihany ilay fanambarana. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
hanaja (nitranga in-2) : Etsy ankilan'izay dia niantso ireo kandidà rehetra niatrika ny fifidianana filoham-pirenena na koa ny fifidianana solombavambahoaka ary ireo mpanao politika nandray anjara tamin'ny fikaroham-bahaolana tamin'ny krizy teto Madagasikara mba hanaja sy hanaraka ny lalàna mifehy ny fifidianana hatrany ny Vondrona Eoropeanina. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
atleta (nitranga in-2) : Mbola hiaro ny voninahitr'i Madagasikara ihany koa ireo atleta malagasy amin'ireo «Meeting» any Maorisy sy La Réunion ary ny hazakazaka lavitr'ezaka mifampitohy any Saint-Benoit (La Réunion). (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
bisky (nitranga in-2) : Nozaraina kilalao, vatomamy sy bisky ny zanaky ny mpiasa miisa 1 300 nandritra izany. (FITANTANANA NY RENIVOHITRA-Hampitombo ny fidiram-bolany ny kaominina Antananarivo)
pasitera (nitranga in-4) : efa nisedra ny mafy saingy tsy niamboho adidy teo amin'ny fanatanterahana ny asa masina napetrak'Andriamanitra taminy ny pasitera, Rakotomanana Jean Roussel, mpitandrina etsy amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fkjm), Atsimon'i Mahamasina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Ninos (nitranga in-1) : 15 500 no nahazo izany fanomezana Noely niarahana tamin'ny Star izany ka anisan'ireny ny Akany Avoko, ny Casa de Los Ninos Ilanivato, ny Akany NRJ, ny Akamasoa, Fikambanana Laka…
nakana (nitranga in-1) : Hialana amin'ny mety tsy fahaiza-miaraka no antony tsy dia nakana mpilalao betsaka hanatevina ny Cnaps Sport», hoy hatrany i Titi Rasoanaivo. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
Pantekôsta (nitranga in-1) : Migadona ny Pantekôsta, dia feno Fanahy Masina tokoa isika. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
làlana (nitranga in-1) : I Ahrullo Dadaboev, ilay olona naka ny sary ka nandefa izany tany amin'ny Facebook, no nilaza fa mpamafa làlana iray no nampiasa ilay saina mba hitaterana fako tao Khujand, tanàna iray any Atsimon'ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
ankamaroantsika (nitranga in-1) : Matoa itoeran'ny haratsiana tahaka izao ny fihetsika ataon'ny ankamaroantsika. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
napetrak' (nitranga in-2) : efa nisedra ny mafy saingy tsy niamboho adidy teo amin'ny fanatanterahana ny asa masina napetrak'Andriamanitra taminy ny pasitera, Rakotomanana Jean Roussel, mpitandrina etsy amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fkjm), Atsimon'i Mahamasina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
tenako (nitranga in-2) : Isaky ny maneno ny lakolosim-piangonana mana­kaiky ny trano nipetrahanay dia taitra foana ny tenako ary nanatona moramora niresaka ny mpitandrina teo anivon'ny Fiangonana Fjkm tany an-toerana», araka ny fitantarany. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
nosoratan' (nitranga in-1) : ity lahatsoratra nosoratan'i Angilee Shah ho an'ny “The World” dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
Jesoa (nitranga in-2) : efa nisedra ny mafy saingy tsy niamboho adidy teo amin'ny fanatanterahana ny asa masina napetrak'Andriamanitra taminy ny pasitera, Rakotomanana Jean Roussel, mpitandrina etsy amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fkjm), Atsimon'i Mahamasina. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
Réunion (nitranga in-1) : Mbola hiaro ny voninahitr'i Madagasikara ihany koa ireo atleta malagasy amin'ireo «Meeting» any Maorisy sy La Réunion ary ny hazakazaka lavitr'ezaka mifampitohy any Saint-Benoit (La Réunion). (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
Club (nitranga in-1) : Taorian'ny fifaninanam-pirenena no efa niatrika fifaninanana maromaro tany Frantsa izy, teo ambany fitantanan'ny klioba Tennis Club de Boulogne Billan-court (TCBB). (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
nenty (nitranga in-2) : Nisy olona tsara sitrapo nilaza tany amin'ny zandary nitatitra fa misy an- dramena nentin'ny kamiao nankany Antalaha. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
ankoatry (nitranga in-1) : Nampakatra ambony ny sainam-pireneny ka nanadio azy no tokony nataon'ny tena olom-pirenena marina, ankoatry ny fanajàna ny saina, sy ny tanindrazana, ary ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
hamoaka (nitranga in-1) : Mampirisika ny manam-pahefana malagasy izahay hanao izay hahazoana antoka fa mizotra amin'ny fomba mirindra ny fanisam-bato ary hamoaka vokatra azo antoka», hoy ilay fanambarana. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
Bank (nitranga in-1) : Hosokafana amin'ny fandraisantsika anjara indray amin'ny «Marathon Bank Of Africa», hotontosaina any Bamako (Mali), amin'ny 13 janoary 2014 ho avy izao. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
Ambaran' (nitranga in-1) : Ambaran'i Morris fa takany ny antony tsy nanomezan'ilay fikambanana Kambodziana vola azy — izy irery no hany vahiny tao, ary tsy vitan-dry zareo ny handoa ny karamany — saingy heveriny fa ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ao Londona kosa dia nàka tombony fotsiny tamin'ny hamaozatry ny tsenan'ny asa ary nanome asa ho azy, izay asa tokony hataon'olona mandray karama. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
notsaboina (nitranga in-1) : Nisedra aretina mafy sy sarotra notsaboina koa i pasitera. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Fitovinany (nitranga in-1) : Hatramin'izao fotoana izao aloha dia i Chinah, mpilalaon'ny Tiavo Tem, avy any Vatovavy Fitovinany, no hany mpilalao hanatevina azy ireo. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
dramena (nitranga in-1) : Nisy olona tsara sitrapo nilaza tany amin'ny zandary nitatitra fa misy an- dramena nentin'ny kamiao nankany Antalaha. (VAROMAIZINA-Bolabolana andramena 449 tratra tao anaty kamiao efatra)
Ahrullo (nitranga in-2) : Sary nalain'i Ahrullo Dadaboev, efa nahazoana alalana. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Mercedes (nitranga in-1) : Fiara Mercedes Sprinter no nentin'ilay Sinoa tamin'io fotoana io. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
хузновар (nitranga in-1) : Niteny i Ozod Orzuyev fa [tj]:
Ruslan (nitranga in-2) : Ho valin'io lahatsoratra io dia nanoratra i Ruslan Ruslan [tj]:
isak' (nitranga in-1) : «Havoaka isak'ireo fari-piadidiam-pifidianana izany», hoy ihany i Béatrice Atallah, omaly. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
hitany (nitranga in-1) : Tsy hitany, araka izany, ireo olona nitifitra ny vadiny teo am-pamiliana», hoy ihany ny fanazavana avy amin'ny Polisy manao famotorana. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
vonoan' (nitranga in-1) : Hatramin'ny omaly kosa anefa dia tsy mbola fantatra izay tena antony nitifirana azy «Hatreto aloha dia ahiana halatra fiara no anton'ilay vonoan'olona», hoy ny polisy. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
Nanjing (nitranga in-1) : Ny tena hetsika lehibe iraisam-pirenena hatrehantsika ny Lalao Olympika ho an'ny tanora (JOJ), hotontosaina any Nanjing (Chine) amin'ny 16 – 28 aogositra. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
nahadingana (nitranga in-1) : Tamin'ny janoary 2013 dia nahadingana ireo fihodinana roa voalohany i Randy saingy teo amin'ny dingan'ny famaranana no nahintsan'ilay tera-tany italianina, Arianne Capogrosso, tamin'ny seta roa. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
nosoniavy (nitranga in-1) : Hatramin'izao fotoana izao dia mbola tsy nisy aloha ny fifanarahana hafa nosoniavin'ity mpamono baolina betsaka indrindra teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra frantsay ity. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
Akamasoa (nitranga in-1) : 15 500 no nahazo izany fanomezana Noely niarahana tamin'ny Star izany ka anisan'ireny ny Akany Avoko, ny Casa de Los Ninos Ilanivato, ny Akany NRJ, ny Akamasoa, Fikambanana Laka…
Robinson (nitranga in-4) : Noho izany dia aleoko mandeha any an-toeran-kafa», hoy ity jeneraly misotro ronono ity, izay isan'ny nanohana ny kandidà Jean Louis Robinson tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa notanterahina ny 20 desambra teo. (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
ЭЭЭЭЭЭЭЭ (nitranga in-1) : Ho valin'io lahatsoratra io dia nanoratra i Ruslan Ruslan [tj]:
nangatahy (nitranga in-1) : Miandry ny fanasana manokana avy amin'ny Kaonfederasiona afrikanina ho an'ny tenisy, nangatahin'ny federasiona malagasy ho azy hahafahany miatrika avy hatrany ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika, i Randy amin'izao fotoana izao. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
Sylvana (nitranga in-1) : Tsy mba mividy kilalao ho azy ireo mantsy izahay, raha tsy amin'ny fotoana toy izao”, hoy i Sylvana Fleurys, renim-pianakaviana, nividy kilalao ho an'ny zanany, tetsy amin'ny Tsenabe Noely, eny Mahamasina, omaly. (KILALAON’ANKIZY-Mandany hatramin’ny Ar 240 000 ny tokantrano iray)
Paris (nitranga in-1) : «Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny volana septambra farafahatarany no manao fifanarahana aminay ny mpikarakara raha eto an-
toerana», hoy kosa i Njakatiana, izay hamarana ny taona any Paris. (HERINANDRO MIALOHA-Mbola mangingina ireo hetsika hamaranana ny taona)
Faratsiho (nitranga in-1) : Toy ny any Faratsiho dia kandidà tsy miankina nahazo vato be indrindra, raha ny vokatra vonjimaika, no velona ahiahy sao misy manodina izany. (Tapany)
Solofonirina (nitranga in-1) : Tsy nandeha mihitsy anefa ny tsena tamin'ity, raha oharina ny tamin'ny taon-dasa”, hoy i Solofonirina Fitahiana, mpivarotra kilalao vita sinoa, etsy Soarano. (KILALAON’ANKIZY-Mandany hatramin’ny Ar 240 000 ny tokantrano iray)
hampiasa (nitranga in-1) : Eo am-piandrasana izay mety hiafaran'ity mpilalao frantsay ity dia hisahana ny asana mpanao gazety mandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an' ny baolina kitra any Brezila izy amin'ny jona 2014, ka ny BBC no hampiasa azy amin'izany fotoana izany. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
zanako (nitranga in-2) : “Telo mianadahy ny zanako. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Randy (nitranga in-3) : hiatrika ny fifaninanana tenisy, «Les Petits AS de Tarbes», amin'ny 16 – 26 janoary 2014, hotontosaina any Frantsa, i Randy Randrianasoloson. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
isaorana (nitranga in-1) : Efa drafitra napetrak' Andriamanitra mihitsy fa tsy tongatonga foana izany ary isaorana Azy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
fivahinianany (nitranga in-1) : «Niarahan'ny rehetra nanapaka ny tsy hanao fety fa hanomana ny fifaninanana afrikanina eo amin'ny baolina kitra», hoy i Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny Cnaps Sport, nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fandaharana ara-panatanjahantena, «Fou Sport», entanin'ny mpanao gazety ao amin'ny vondron-gazety L'Express de Madagascar, nandeha tamin'ny Radio Tana, omaly. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
дарег (nitranga in-1) : Сад дарег. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
ahafahana (nitranga in-1) : “Amin'ny alalan'ny haban-tsena, hetran-tany, haban'ny fiantsonana no ahafahana mampitombo ny tetibolan'ny fitantanana ny kaominina”, hoy Rasamimanana Olga, lefitry ny filohan'ny delegasionin'Antananarivo, omaly, nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Noely, ho an'ny mpiasan'ny Cua, tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina. (FITANTANANA NY RENIVOHITRA-Hampitombo ny fidiram-bolany ny kaominina Antananarivo)
Kandeh (nitranga in-1) : Toy ny fanazavan'i Demba Kandeh, mpiasa mpirotsaka an-tsitrapo ao Gambia, “Zava-mahafinaritra ny firotsahana an-tsitrapo. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
Aretina (nitranga in-1) : Aretina izay tsy maintsy nilàna fandidiana hatrany am-pitan-dranomasina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
hanamarika (nitranga in-1) : «Miara-manantena amin'ny vahoaka malagasy i Etazonia fa ireo fifidianana ireo no hanamarika ny fiverenan'ny fitondrana demokratika eto Madagasikara. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
rakikira (nitranga in-3) : Mandritra izany seho izany no hitondrany indray ireo hira 10 ao anatin'ity rakikira ity raha tsy hitanisa afa-tsy ny «Fitiavana malaza» sy ny «Fitondrana mahavoa». (SEHO FARANY-Hanatosaka ny «maha-domelina» indray i Samoëla)
York (nitranga in-1) : andrasana ato ho ato ny mety hiafaran'i Thierry Henry, lohalaharana frantsay milalao any amin' ny New York Red Bulls. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
ahafahany (nitranga in-1) : Io fifaninanana any Tarbes io no hanokafany ny fifaninanana amin'ny taona 2014, ka tsy ahafahany miatrika ny dingan'ny fifanintsanana eo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika tapany atsimo atao any Botsoana amin'ny 5 – 12 janoary ho avy izao. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
hataon' (nitranga in-1) : Ambaran'i Morris fa takany ny antony tsy nanomezan'ilay fikambanana Kambodziana vola azy — izy irery no hany vahiny tao, ary tsy vitan-dry zareo ny handoa ny karamany — saingy heveriny fa ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ao Londona kosa dia nàka tombony fotsiny tamin'ny hamaozatry ny tsenan'ny asa ary nanome asa ho azy, izay asa tokony hataon'olona mandray karama. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
traikefa (nitranga in-1) : “Nirotraka an-tsitrapo nanao azy io aho, fanapahan-kevitro araka izany ilay hiara-hiasa amin-dry zareo, saingy notakiako koa ny hanao asa izay tsy maintsy handraisako karama, izay mitaky traikefa ambony noho ny vao mianatra asa,” hoy i Morris says. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
fahatomombanan' (nitranga in-1) : Araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly tetsy amin'ny Hôtel Carlton Anosy, dia «maro tsy tambo isaina ireo porofo ananany mahakasika ny tsy fahatomombanan'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka, notanterahina ny zoma 20 desambra lasa teo». (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
Razaranaina (nitranga in-1) : Ny talen'ny Sampan-draharaha miady amin'ny famotsiam-bola, Razaranaina Jean Claude no nanambara izany, omaly. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
fifampizaràna (nitranga in-1) : org tamin'ny 19 Desambra 2013 ary naverina navoaka araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
mana­kaiky (nitranga in-1) : Isaky ny maneno ny lakolosim-piangonana mana­kaiky ny trano nipetrahanay dia taitra foana ny tenako ary nanatona moramora niresaka ny mpitandrina teo anivon'ny Fiangonana Fjkm tany an-toerana», araka ny fitantarany. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
добру (nitranga in-1) : Не пропадать же добру. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
vondronà (nitranga in-1) : — Бачаи Сако (@BachaiSako) December 17, 2013
Morris (nitranga in-3) : Laura Morris, 28 taona, mpamoaka lahatsoratra [ho an'ny Rising Voices. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
Razafimanantsoa (nitranga in-1) : Eo ihany koa ireo hosoka samihafa tsikaritra tamin'ireo firaketana an-tsoratra ny voka-pifidianana», araka ny fanazavan'ny Me Hanitra Razafimanantsoa, mpisolovava ny ankolafy Ravalomanana teny an-toerana, omaly. (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
tazomy (nitranga in-1) : Olona iray milaza fa tompony no efa tazomin' ny zandary amin'izao fotoana izao noho ny fitate- rana tsy ara-dalàna nata-ony. (VAROMAIZINA-Bolabolana andramena 449 tratra tao anaty kamiao efatra)
farafahatarany (nitranga in-1) : «Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny volana septambra farafahatarany no manao fifanarahana aminay ny mpikarakara raha eto an-
hanatosaka (nitranga in-1) : Mbola hanatosaka indray ny «maha-domelina» i Samoëla amin'ny seho takariva izay atolony, etsy amin'ny Piment Café Behoririka, ny zoma 27 desambra izao, manomboka amin'ny 9 ora alina. (SEHO FARANY-Hanatosaka ny «maha-domelina» indray i Samoëla)
Tajik (nitranga in-2) : sary nahabe resaka ahitana ny sainam-pirenenan'i Tajik. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
ireto (nitranga in-1) : «Tena tsara fahatongavana ao anatin'ny fety ireto loka ireto», araka ny fanehoan'i Bodo­voahangy Ony ny hafaliany. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
Fleurys (nitranga in-1) : Tsy mba mividy kilalao ho azy ireo mantsy izahay, raha tsy amin'ny fotoana toy izao”, hoy i Sylvana Fleurys, renim-pianakaviana, nividy kilalao ho an'ny zanany, tetsy amin'ny Tsenabe Noely, eny Mahamasina, omaly. (KILALAON’ANKIZY-Mandany hatramin’ny Ar 240 000 ny tokantrano iray)
Ankorondrano (nitranga in-3) : Aleonay mihodina any amin'ny Boulevard de l'Europe”, hoy i Nary, mpamily fiarakaretsaka etsy Ankorondrano. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
hitanisa (nitranga in-1) : Mandritra izany seho izany no hitondrany indray ireo hira 10 ao anatin'ity rakikira ity raha tsy hitanisa afa-tsy ny «Fitiavana malaza» sy ny «Fitondrana mahavoa». (SEHO FARANY-Hanatosaka ny «maha-domelina» indray i Samoëla)
nitifirana (nitranga in-1) : Hatramin'ny omaly kosa anefa dia tsy mbola fantatra izay tena antony nitifirana azy «Hatreto aloha dia ahiana halatra fiara no anton'ilay vonoan'olona», hoy ny polisy. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
nadika (nitranga in-2) : Mpanoratra Alexander Sodiqov · Nandika miora
reddit (nitranga in-2) : Mpanoratra Alexander Sodiqov · Nandika miora
nilàna (nitranga in-1) : Aretina izay tsy maintsy nilàna fandidiana hatrany am-pitan-dranomasina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
naverina (nitranga in-1) : org tamin'ny 19 Desambra 2013 ary naverina navoaka araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
Nampakatra (nitranga in-1) : Nampakatra ambony ny sainam-pireneny ka nanadio azy no tokony nataon'ny tena olom-pirenena marina, ankoatry ny fanajàna ny saina, sy ny tanindrazana, ary ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Vital (nitranga in-1) : nanapa-kevitra ny hamonjy fodiana hiala sasatra kely any ambanivohitr'i Toliara ny jeneraly Camille Vital rehefa nosakanana tsy afaka hiazo ny nosy Maorisy, ny sabotsy lasa teo. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
Afrika (nitranga in-5) : Io fifaninanana any Tarbes io no hanokafany ny fifaninanana amin'ny taona 2014, ka tsy ahafahany miatrika ny dingan'ny fifanintsanana eo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika tapany atsimo atao any Botsoana amin'ny 5 – 12 janoary ho avy izao. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
nitantanany (nitranga in-2) : Tao anatin'io fotoana lava dia lava nitantanany ny fiangonana Fjkm Atsimon'i Mahamasina io ihany koa izy no namoy ny rainy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Angilee (nitranga in-1) : ity lahatsoratra nosoratan'i Angilee Shah ho an'ny “The World” dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
Vatovavy (nitranga in-1) : Hatramin'izao fotoana izao aloha dia i Chinah, mpilalaon'ny Tiavo Tem, avy any Vatovavy Fitovinany, no hany mpilalao hanatevina azy ireo. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
Cathérine (nitranga in-1) : «Mba ho famaranana tanteraka ny fitondrana tetezamita sy ny krizy politika tamin'ny 2009 no anton'izany», hoy ny fanambarana nataon'i Cathérine Ashton, mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeanina, nivoaka omaly. (FIROSOANA AMIN’NY REPOBLIKA FAHA-IV-Manantena ny fahatongavan-tsain’ireo mpanao politika ny Vondrona Eoropeanina)
Хамин (nitranga in-1) : Tonga hatrany amin'ny Twitter ilay sary izay nahatonga an'i Mardikor hanontany hoe [tj]:
nogiazan' (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia ny fiahiahiana famotsiam-bola tamin'ny fanafarana ireo fiara tsy mataho-dalana izay nogiazan'ny fitondrana tetezamita any Toamasina no antony nisakanana ity Praiminisitra teo aloha ity tsy hivoaka an'i Madagasikara. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
nitandremany (nitranga in-1) : 39 taona maninjitra izay no nitandremany teo anivon'io fiangonana Fjkm etsy Mahamasina io. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
mombamomba (nitranga in-1) : Araka ny loharanom-baovao teo anivon' ny Polisy misahana ny heloka bevava eny Anosy dia betsaka ireo olona tonga milaza ny mombamomba ireo olona nahavanon-doza tamin'io fotoana io. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
nohitsakitsahintsika (nitranga in-1) : Isika niezaka nampivady ny finoan-drazana sy ny finoana kristianina, kanefa na ny voalohany na ny faharoa dia efa samy nohitsakitsahintsika tanteraka. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
nanohana (nitranga in-1) : Noho izany dia aleoko mandeha any an-toeran-kafa», hoy ity jeneraly misotro ronono ity, izay isan'ny nanohana ny kandidà Jean Louis Robinson tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa notanterahina ny 20 desambra teo. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
sedray (nitranga in-1) : Araka ny fitantarany dia misy hatrany ireo paikady samihafa entiny mamaha ireo olana samihafa sedrain'ireo mpino eo anivon'ity fiangonana ity. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Allah (nitranga in-1) : com/J798HR27xB
noenty (nitranga in-1) : “Efa narary io lehilahy io no noentin'ny fianakaviany teto amin'ny hopitalin'ny distrika (Chd) eto Soanierana. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
ataon' (nitranga in-5) : Tsy ataon'ny tokantrano ambanin-javatra, amin'izao fetin'ny Noely izao, ny tetibola hividianana kilalao ho an'ny ankizy. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
karakaray (nitranga in-1) : Tamin'ity taona 2013 ity dia i Hajanirina Andri-amparany no nisolo tena antsika tamin'io fifaninanana karakarain'ny BOA. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
kandidà (nitranga in-8) : Mbola mitoetra hatrany ny ahiahin'ireo kandidà ho solombavambahoaka sasany mahakasika ny hala-bato. (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
hovaina (nitranga in-1) : Kanefa, bilaogera maro no nanoso-kevitra fa tokony hovaina ny sainam-pirenena sy ny famantarana nasionaly mba hitarafana tsaratsara kokoa ny fiovan-toetran'ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
ankatoky (nitranga in-2) : Tsy misy afa-tsy ampahan-dalana vitsy sisa no azo andehanana amin'izao ankatoky ny fety izao, raha ny nambaran'ny sampan-draharahan'ny fifamoivoizana sy ny fivezivezena eto an-drenivohitra (Ddu). (KILALAON’ANKIZY-Mandany hatramin’ny Ar 240 000 ny tokantrano iray)
rugby (nitranga in-1) : hanam-bintana hiatrika fifaninanana afrikanina ny Makis vehivavy
Liga (nitranga in-1) : Ny Liga Desportivo Muçulmana, avy any Mozambika, no hihaona amin'izy ireo any Maputo amin'ny 7, 8, 9 febroary ho avy izao, mandritra ny lalao savaranonando. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
hanamafisana (nitranga in-1) : Tamin'ny fahombiazana tanteraka no nankalazan'ny fanjakana ny sainam-pirenena ho toy ny ezaka hanamafisana ny toe-po tia tanindrazana. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
handraisako (nitranga in-1) : “Nirotraka an-tsitrapo nanao azy io aho, fanapahan-kevitro araka izany ilay hiara-hiasa amin-dry zareo, saingy notakiako koa ny hanao asa izay tsy maintsy handraisako karama, izay mitaky traikefa ambony noho ny vao mianatra asa,” hoy i Morris says. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
Laura (nitranga in-1) : Laura Morris, 28 taona, mpamoaka lahatsoratra [ho an'ny Rising Voices. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
narary (nitranga in-2) : “Efa narary io lehilahy io no noentin'ny fianakaviany teto amin'ny hopitalin'ny distrika (Chd) eto Soanierana. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
пропадать (nitranga in-1) : Не пропадать же добру. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
hoentiny (nitranga in-1) : «Vao manomboka ny taom-pilalaovana dia tokony efa mivonona ny ekipa tsirairay amin'ny mpilalao hoentiny miady hatrany amin'ny fifaninanana afrikanina. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
voalohandohan' (nitranga in-1) : Na dia izany aza dia aleo aloha hianoka tanteraka ao anatin'ny fetin'ny faran'ny taona ny Malagasy ka tokony ho any amin'ny voalohandohan'ny volana janoary 2014 any ho any no hamoahan'ny Cenit ny voka-pifidianana vonjimaika momba io fifidianana io», hoy izy tetsy amin'ny birao foiben'ny Cenit, Alarobia, omaly hariva. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
Fotsialalana (nitranga in-2) : Lehilahy iray 37 taona, mponina ao amin'ny kaominina Fotsialalana mantsy, no namoy ny ainy ny alakamisy 19 desambra lasa teo, araka ny fanambaran'ny kaomandin'ny zandarimariam-pirenena any an-toerana. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
nisian' (nitranga in-1) : Ranaivoson Faniry
Andro vitsivitsy lasa izay no nisian'ilay fitifirana Sinoa. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
hiresahana (nitranga in-1) : Ny fiangonana FJKM etsy atsimon'i Mahamasina amin'ny endriny vaovao
Tsy misaraka amin'ny vavaka Mialoha ny hiresahana amin'ireo olona tonga ao aminy dia tsy manadino ny mivavaka hatrany izy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
voakasika (nitranga in-1) : « Manainga ny lafin-kery voakasika rehetra izahay hiara-hientana hamerenana ny fanjakana tan-dalàna, hiantoka ny fampiharana ireo zon'olombelona fototra ary hiara-hiasa ao anatin'ny fampihavanana mba hamerenena amin'ny laoniny ny fiainana politika sy ny fahasalaman'ny toekaren'ny firenena», hoy ihany ilay fanambarana. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
Desportivo (nitranga in-1) : Ny Liga Desportivo Muçulmana, avy any Mozambika, no hihaona amin'izy ireo any Maputo amin'ny 7, 8, 9 febroary ho avy izao, mandritra ny lalao savaranonando. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
nataon' (nitranga in-4) : «Mba ho famaranana tanteraka ny fitondrana tetezamita sy ny krizy politika tamin'ny 2009 no anton'izany», hoy ny fanambarana nataon'i Cathérine Ashton, mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeanina, nivoaka omaly. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
itoeran' (nitranga in-1) : Matoa itoeran'ny haratsiana tahaka izao ny fihetsika ataon'ny ankamaroantsika. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
hitarafana (nitranga in-1) : Kanefa, bilaogera maro no nanoso-kevitra fa tokony hovaina ny sainam-pirenena sy ny famantarana nasionaly mba hitarafana tsaratsara kokoa ny fiovan-toetran'ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
hanaonao (nitranga in-1) : ankoatra ny fiarahabana ny Malagasy nandray anjara am-pitoniana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka, notanterahina ny 20 desambra teo, dia nanaitra ny mpitondra tsy hanaonao foana i Etazonia, araka ny fanambarana navoakany, omaly. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
anton' (nitranga in-2) : «Mba ho famaranana tanteraka ny fitondrana tetezamita sy ny krizy politika tamin'ny 2009 no anton'izany», hoy ny fanambarana nataon'i Cathérine Ashton, mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeanina, nivoaka omaly. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
hamaranana (nitranga in-1) : Herinandro alohan'ny famaranana ny taona anefa zara raha misy ireo lanonana samihafa entina hamaranana ny taona 2013 sy hitsenana ny taona vaovao. (HERINANDRO MIALOHA-Mbola mangingina ireo hetsika hamaranana ny taona)
notanterahina (nitranga in-4) : Noho izany dia aleoko mandeha any an-toeran-kafa», hoy ity jeneraly misotro ronono ity, izay isan'ny nanohana ny kandidà Jean Louis Robinson tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa notanterahina ny 20 desambra teo. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
bolabolana (nitranga in-1) : Tamin'ny 21 desambra lasa teo, araka ny tatitra azo, no tra-tehaky ny zandary tao anaty fiara vaventy efatra tany Nosiavina Sambava ireo bolabolana andramena miisa 449. (VAROMAIZINA-Bolabolana andramena 449 tratra tao anaty kamiao efatra)
heveriny (nitranga in-1) : Ambaran'i Morris fa takany ny antony tsy nanomezan'ilay fikambanana Kambodziana vola azy — izy irery no hany vahiny tao, ary tsy vitan-dry zareo ny handoa ny karamany — saingy heveriny fa ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ao Londona kosa dia nàka tombony fotsiny tamin'ny hamaozatry ny tsenan'ny asa ary nanome asa ho azy, izay asa tokony hataon'olona mandray karama. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
ekipany (nitranga in-1) : R A
Ny ho lasa lavitra no tanjon'i Titi Rasoanaivo ho an'ny ekipany. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
Cons­truction (nitranga in-1) : Ankoatra ny «tab­lette», dia fanampin'ny loka azon'ity mpandray anjara ity ihany koa ny fandehanana maka sary miaraka amin'ny «Oxygeniuz», ny kojakoja fanaingoana avy amin'ny ABC Cons­truction, fitaizam-batana ao amin'ny Centre Kintana ary fikarakarana bika aman'endrika miaraka amin'ny Annick Beauté. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
Roméo (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
fiara (nitranga in-5) : «Nandeha fiara tsy mataho-dalana (4X4) izahay tamin'io fotoana io rehefa avy nandevina. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
hitondrana (nitranga in-1) : «Na dia any ivelany aza dia miantso ahy ireo zanako ireo mba hitondrana am-bavaka ny fiainany. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Dadaboev (nitranga in-2) : Sary nalain'i Ahrullo Dadaboev, efa nahazoana alalana. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
toekaren' (nitranga in-1) : « Manainga ny lafin-kery voakasika rehetra izahay hiara-hientana hamerenana ny fanjakana tan-dalàna, hiantoka ny fampiharana ireo zon'olombelona fototra ary hiara-hiasa ao anatin'ny fampihavanana mba hamerenena amin'ny laoniny ny fiainana politika sy ny fahasalaman'ny toekaren'ny firenena», hoy ihany ilay fanambarana. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
Razanarivelo (nitranga in-1) : Misy mandany hatramin'ny Ar 150 000 indray mividy anefa”, hoy kosa Razanarivelo Herinirina, mpivarotra kilalao tonta etsy Mahamasina. (KILALAON’ANKIZY-Mandany hatramin’ny Ar 240 000 ny tokantrano iray)
2014 (nitranga in-10) : Na dia izany aza dia aleo aloha hianoka tanteraka ao anatin'ny fetin'ny faran'ny taona ny Malagasy ka tokony ho any amin'ny voalohandohan'ny volana janoary 2014 any ho any no hamoahan'ny Cenit ny voka-pifidianana vonjimaika momba io fifidianana io», hoy izy tetsy amin'ny birao foiben'ny Cenit, Alarobia, omaly hariva. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
nodimandry (nitranga in-1) : Io reniny izay efa nodimandry io no nanafatra ny rainy hitaiza azy sy ireo mpiray tampo aminy tamin'ny fomba kristianina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Мардикор (nitranga in-1) : com/t6sZr8nTUc
— Мардикор (@mardikor) December 17, 2013 Tena “ilay firenena mamintsika” tokoa ve ity [teny ao anatin'ny hiram-pirenena]. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
JULIANO (nitranga in-1) : SARY SY SORATRA: JULIANO RANDRIANJA. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Oohh (nitranga in-1) : Ho valin'io lahatsoratra io dia nanoratra i Ruslan Ruslan [tj]:
googleplus (nitranga in-2) : Mpanoratra Alexander Sodiqov · Nandika miora
Mirehareha (nitranga in-1) : Mirehareha fatratra ny amin'ny fanànana ny fihantonana saina avo indrindra maneran-tany ary mbola mieritreritra ny hanamonsana ny zava-bita tsara indrindra maneran-tany eo amin'ny halavan'ny saina. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
hampiharana (nitranga in-1) : Toy ny mahazatra hatramin'izay amin'ny fanambaran'i Etazonia dia mitaky hatrany ny hampiharana ny zon'olombelona izy ireo. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
Madagascar (nitranga in-2) : Nambaran'ny mpitantana ny BOA Madagascar tamin'ny fotoana nahatongavan'ireo delegasiona fa «mbola handray anjara hatrany isika». (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
nahatonga (nitranga in-1) : Tonga hatrany amin'ny Twitter ilay sary izay nahatonga an'i Mardikor hanontany hoe [tj]:
nitaizany (nitranga in-1) : Ny fivavahana rahateo no isan'ny nitaizany ireo zanany hatramin'ny fahazazany. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Tennis (nitranga in-1) : Taorian'ny fifaninanam-pirenena no efa niatrika fifaninanana maromaro tany Frantsa izy, teo ambany fitantanan'ny klioba Tennis Club de Boulogne Billan-court (TCBB). (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
nosakanana (nitranga in-1) : nanapa-kevitra ny hamonjy fodiana hiala sasatra kely any ambanivohitr'i Toliara ny jeneraly Camille Vital rehefa nosakanana tsy afaka hiazo ny nosy Maorisy, ny sabotsy lasa teo. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
saripika (nitranga in-1) : 2», loka lehibe avy amin' ilay fifaninanana saripika niarahana tamin'ny Telma, tao amin'ny pejy facebook. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
Hosokafana (nitranga in-1) : Hosokafana amin'ny fandraisantsika anjara indray amin'ny «Marathon Bank Of Africa», hotontosaina any Bamako (Mali), amin'ny 13 janoary 2014 ho avy izao. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
nampiasa (nitranga in-1) : I Ahrullo Dadaboev, ilay olona naka ny sary ka nandefa izany tany amin'ny Facebook, no nilaza fa mpamafa làlana iray no nampiasa ilay saina mba hitaterana fako tao Khujand, tanàna iray any Atsimon'ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
asana (nitranga in-1) : Eo am-piandrasana izay mety hiafaran'ity mpilalao frantsay ity dia hisahana ny asana mpanao gazety mandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an' ny baolina kitra any Brezila izy amin'ny jona 2014, ka ny BBC no hampiasa azy amin'izany fotoana izany. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
Beauté (nitranga in-1) : Ankoatra ny «tab­lette», dia fanampin'ny loka azon'ity mpandray anjara ity ihany koa ny fandehanana maka sary miaraka amin'ny «Oxygeniuz», ny kojakoja fanaingoana avy amin'ny ABC Cons­truction, fitaizam-batana ao amin'ny Centre Kintana ary fikarakarana bika aman'endrika miaraka amin'ny Annick Beauté. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
Julienne (nitranga in-1) : «Ny an'ny tena ihany ity no ananana loza satria karama raisina no efa nilaharako teto efa ho adiny telo izao», hoy Rasoarinoro Julienne. (DAB - BANKY-Sady nilaharana no nampijaly ny fakàna vola)
Хайрхоҳ (nitranga in-1) : com/J798HR27xB
niomana (nitranga in-2) : Ny tsy azo lavina kosa anefa, saika efa niomana foana amin'ny fanafanana ny fetin'ny faran'ny taona toy izao ireo orkesitra samihafa ka santionany amin' ireny ny Ambin'ts Orchestra sy ny Melodihy. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
Sambava (nitranga in-1) : Tamin'ny 21 desambra lasa teo, araka ny tatitra azo, no tra-tehaky ny zandary tao anaty fiara vaventy efatra tany Nosiavina Sambava ireo bolabolana andramena miisa 449. (VAROMAIZINA-Bolabolana andramena 449 tratra tao anaty kamiao efatra)
Annick (nitranga in-1) : Ankoatra ny «tab­lette», dia fanampin'ny loka azon'ity mpandray anjara ity ihany koa ny fandehanana maka sary miaraka amin'ny «Oxygeniuz», ny kojakoja fanaingoana avy amin'ny ABC Cons­truction, fitaizam-batana ao amin'ny Centre Kintana ary fikarakarana bika aman'endrika miaraka amin'ny Annick Beauté. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
Arianne (nitranga in-1) : Tamin'ny janoary 2013 dia nahadingana ireo fihodinana roa voalohany i Randy saingy teo amin'ny dingan'ny famaranana no nahintsan'ilay tera-tany italianina, Arianne Capogrosso, tamin'ny seta roa. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
avylavitra (nitranga in-1) : Mpanoratra PRI · Nandika avylavitra
nilaharako (nitranga in-1) : «Ny an'ny tena ihany ity no ananana loza satria karama raisina no efa nilaharako teto efa ho adiny telo izao», hoy Rasoarinoro Julienne. (DAB - BANKY-Sady nilaharana no nampijaly ny fakàna vola)
Randrianasoloson (nitranga in-1) : hiatrika ny fifaninanana tenisy, «Les Petits AS de Tarbes», amin'ny 16 – 26 janoary 2014, hotontosaina any Frantsa, i Randy Randrianasoloson. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
navoaka (nitranga in-1) : org tamin'ny 19 Desambra 2013 ary naverina navoaka araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
1975 (nitranga in-1) : Ny taona 1971 izy no efa mpitandrina ka ny taona 1975 no nitantanany ny Fjkm, etsy Mahama­sina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
1971 (nitranga in-1) : Ny taona 1971 izy no efa mpitandrina ka ny taona 1975 no nitantanany ny Fjkm, etsy Mahama­sina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
hitambarana (nitranga in-1) : Tany amin'ny fasana hitambarana kosa no nalevina izy. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
Carlton (nitranga in-2) : Araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly tetsy amin'ny Hôtel Carlton Anosy, dia «maro tsy tambo isaina ireo porofo ananany mahakasika ny tsy fahatomombanan'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka, notanterahina ny zoma 20 desambra lasa teo». (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
hitondra (nitranga in-1) : Ny fanomezanao fotoana ho anà zavatra iray mitàna anao am-po dia mety faran'izay hahafa-po sy hitondra tombony. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
nahitàna (nitranga in-1) : Sary iray nahitàna sainam-pirenena Tajik natsipy tamin'ny tany sy nampiasaina ho solonà fandraofam-pako no niteraka korontana teo amin'ireo mpampiasa mediam-bahoaka tao Tajikistan. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
taksibe (nitranga in-1) : Misy amin'ireo taksibe sasany kosa, no tsy miditra an'Analakely intsony, fa miverin-dalana, rehefa tonga etsy Behoririka. (FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA-Karazan-dalana vitsy sisa no malaladalaka azo aleha)
Hervé (nitranga in-1) : «Noho ny fisian'ny fifidianana sy ny tsy fahafantarana izay mety ho akony sy ny vokany dia aleo tsy nanomana mihitsy sao dia ho very vola eo», araka ny fanazavan'i Luc Hervé avy amin'ny LH Pro, izay efa fantatra amin'ny fikarakarana hetsika faran'ny taona. (HERINANDRO MIALOHA-Mbola mangingina ireo hetsika hamaranana ny taona)
Cnaps (nitranga in-3) : «Niarahan'ny rehetra nanapaka ny tsy hanao fety fa hanomana ny fifaninanana afrikanina eo amin'ny baolina kitra», hoy i Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny Cnaps Sport, nandritra ny fivahinianany tao amin'ny fandaharana ara-panatanjahantena, «Fou Sport», entanin'ny mpanao gazety ao amin'ny vondron-gazety L'Express de Madagascar, nandeha tamin'ny Radio Tana, omaly. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
anatiny (nitranga in-1) : Noho ny fahamaroan'ireo mpaka vola ireo anefa dia maro tamin'ireo milina ireo ihany koa no nisedra olana teknika na ihany koa lany ny vola tao anatiny. (DAB - BANKY-Sady nilaharana no nampijaly ny fakàna vola)
notakiana (nitranga in-1) : Nanomboka ny 29 novambra ka hatramin' ny 22 desambra teo ny fifaninanana ka sary Noely miaraka amin'ny lokon'ny Telma no notakiana tamin'ireo mpandray anjara. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
Filankevitry (nitranga in-1) : Izy rahateo no filohan'ny Filankevitry ny mpamongady matihanina eto Madagasikara (Cgpm). (Tapany)
nipetrahanay (nitranga in-1) : Isaky ny maneno ny lakolosim-piangonana mana­kaiky ny trano nipetrahanay dia taitra foana ny tenako ary nanatona moramora niresaka ny mpitandrina teo anivon'ny Fiangonana Fjkm tany an-toerana», araka ny fitantarany. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Aleonay (nitranga in-1) : Aleonay mihodina any amin'ny Boulevard de l'Europe”, hoy i Nary, mpamily fiarakaretsaka etsy Ankorondrano. (FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA-Karazan-dalana vitsy sisa no malaladalaka azo aleha)
hahafahany (nitranga in-1) : Miandry ny fanasana manokana avy amin'ny Kaonfederasiona afrikanina ho an'ny tenisy, nangatahin'ny federasiona malagasy ho azy hahafahany miatrika avy hatrany ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika, i Randy amin'izao fotoana izao. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
nahatratra (nitranga in-1) : 24 ireo mpandray anjara nametraka ny sariny ary nahatratra 2 913 ireo naneho ny safidiny. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
Toamasina (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia ny fiahiahiana famotsiam-bola tamin'ny fanafarana ireo fiara tsy mataho-dalana izay nogiazan'ny fitondrana tetezamita any Toamasina no antony nisakanana ity Praiminisitra teo aloha ity tsy hivoaka an'i Madagasikara. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
Сако (nitranga in-1) : — Бачаи Сако (@BachaiSako) December 17, 2013
biletà (nitranga in-1) : «Isan'izany ny fisiana biletà tokana misy marika mialoha nampiasaina tamin'ireo fifidianana ireo. (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
Analamanga (nitranga in-1) : Raha tsy misy ny fiovana dia tokony ho fantatra anio avokoa ireo voka-pifidianana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eo anivon'ny faritra Analamanga. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
nahintsan' (nitranga in-1) : Tamin'ny janoary 2013 dia nahadingana ireo fihodinana roa voalohany i Randy saingy teo amin'ny dingan'ny famaranana no nahintsan'ilay tera-tany italianina, Arianne Capogrosso, tamin'ny seta roa. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
Chinah (nitranga in-1) : Hatramin'izao fotoana izao aloha dia i Chinah, mpilalaon'ny Tiavo Tem, avy any Vatovavy Fitovinany, no hany mpilalao hanatevina azy ireo. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
hitsenana (nitranga in-1) : Herinandro alohan'ny famaranana ny taona anefa zara raha misy ireo lanonana samihafa entina hamaranana ny taona 2013 sy hitsenana ny taona vaovao. (HERINANDRO MIALOHA-Mbola mangingina ireo hetsika hamaranana ny taona)
Andavamamba (nitranga in-1) : “Any amin'ny Boulevard de l'Europe, 67ha sy Andavamamba ihany sisa no tsy dia ahitana fitohanana firy”, hoy i Benony Laza, lehiben'ny sampan-draharaha ao amin'ny Ddu. (FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA-Karazan-dalana vitsy sisa no malaladalaka azo aleha)
hiantoka (nitranga in-1) : « Manainga ny lafin-kery voakasika rehetra izahay hiara-hientana hamerenana ny fanjakana tan-dalàna, hiantoka ny fampiharana ireo zon'olombelona fototra ary hiara-hiasa ao anatin'ny fampihavanana mba hamerenena amin'ny laoniny ny fiainana politika sy ny fahasalaman'ny toekaren'ny firenena», hoy ihany ilay fanambarana. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
aretina (nitranga in-1) : Nisedra aretina mafy sy sarotra notsaboina koa i pasitera. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
hanatanteraka (nitranga in-1) : «Vao tany am-bohoka aho dia efa voaantso hanatanteraka io asa fanompoana an'Andriamanitra io. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
агар (nitranga in-1) : Мо худамонро эхтиром накунем агар, ки моро эхтиром мекунад. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
natao (nitranga in-2) : «Ny fandidiana roa farany tamin'ireo dia natao tany Frantsa ary soa ihany fa ny zanakay dia efa nipetraka sy niasa maharitra tany an-toerana tamin'io fotoana nitsaboana ahy io. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
Ivongo (nitranga in-3) : tafakatra 11 ankehitriny ireo maty, noho ny ahiahin'aretina pesta, any amin'ny distrikan'i Soanierana Ivongo. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
Orzuyev (nitranga in-1) : Niteny i Ozod Orzuyev fa [tj]:
akaostika (nitranga in-1) : Na izany aza, tsy hohadinoina ary hiverenana ihany koa ireo hira efa nahafantarana an'i Samoëla taloha ary efa narafitra tao anaty rakikira samihafa toy ny «Kalakely», «Kôfa tia», «Razily», «Poteau be»…
67ha (nitranga in-1) : “Any amin'ny Boulevard de l'Europe, 67ha sy Andavamamba ihany sisa no tsy dia ahitana fitohanana firy”, hoy i Benony Laza, lehiben'ny sampan-draharaha ao amin'ny Ddu. (FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA-Karazan-dalana vitsy sisa no malaladalaka azo aleha)
Rising (nitranga in-1) : Laura Morris, 28 taona, mpamoaka lahatsoratra [ho an'ny Rising Voices. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
hiafaran' (nitranga in-2) : andrasana ato ho ato ny mety hiafaran'i Thierry Henry, lohalaharana frantsay milalao any amin' ny New York Red Bulls. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
hahafahan' (nitranga in-1) : Isan'ny tanjon'ny federasiona ihany koa amin'io taona vaovao io ny hikatsaka tapakila hahafahan' ny Makis hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany, hatao any Londres amin'ny 2015, amin'ny alalan'ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika, amin'ny volana jolay 2014 eto Madagasikara. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
nisolo (nitranga in-1) : Tamin'ity taona 2013 ity dia i Hajanirina Andri-amparany no nisolo tena antsika tamin'io fifaninanana karakarain'ny BOA. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
mpamoaka (nitranga in-1) : Laura Morris, 28 taona, mpamoaka lahatsoratra [ho an'ny Rising Voices. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
twitter (nitranga in-4) : twitter. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
anisan' (nitranga in-2) : 15 500 no nahazo izany fanomezana Noely niarahana tamin'ny Star izany ka anisan'ireny ny Akany Avoko, ny Casa de Los Ninos Ilanivato, ny Akany NRJ, ny Akamasoa, Fikambanana Laka…
Nahazo ny anjarany tao anatin'izany ihany koa anefa ireo mpianatra avy amin'ny EPP dimy eto an-drenivohitra (Ivandry, Betongolo, Ankorondrano, Alarobia ary Ankadivato). (DAB - BANKY-Sady nilaharana no nampijaly ny fakàna vola)
hamoahan' (nitranga in-2) : Na dia izany aza dia aleo aloha hianoka tanteraka ao anatin'ny fetin'ny faran'ny taona ny Malagasy ka tokony ho any amin'ny voalohandohan'ny volana janoary 2014 any ho any no hamoahan'ny Cenit ny voka-pifidianana vonjimaika momba io fifidianana io», hoy izy tetsy amin'ny birao foiben'ny Cenit, Alarobia, omaly hariva. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
lalàna (nitranga in-1) : Etsy ankilan'izay dia niantso ireo kandidà rehetra niatrika ny fifidianana filoham-pirenena na koa ny fifidianana solombavambahoaka ary ireo mpanao politika nandray anjara tamin'ny fikaroham-bahaolana tamin'ny krizy teto Madagasikara mba hanaja sy hanaraka ny lalàna mifehy ny fifidianana hatrany ny Vondrona Eoropeanina. (FIROSOANA AMIN’NY REPOBLIKA FAHA-IV-Manantena ny fahatongavan-tsain’ireo mpanao politika ny Vondrona Eoropeanina)
ankilan' (nitranga in-2) : Etsy ankilan'izay dia niantso ireo kandidà rehetra niatrika ny fifidianana filoham-pirenena na koa ny fifidianana solombavambahoaka ary ireo mpanao politika nandray anjara tamin'ny fikaroham-bahaolana tamin'ny krizy teto Madagasikara mba hanaja sy hanaraka ny lalàna mifehy ny fifidianana hatrany ny Vondrona Eoropeanina. (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
Telma (nitranga in-2) : 2», loka lehibe avy amin' ilay fifaninanana saripika niarahana tamin'ny Telma, tao amin'ny pejy facebook. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
Bulls (nitranga in-1) : andrasana ato ho ato ny mety hiafaran'i Thierry Henry, lohalaharana frantsay milalao any amin' ny New York Red Bulls. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
Бачаи (nitranga in-1) : — Бачаи Сако (@BachaiSako) December 17, 2013
Facebook (nitranga in-2) : Ny mpiserasera amin'ny Facebook ihany no nanao ny fitsarana ny sary be mpitia indrindra. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
hanaovana (nitranga in-1) : Fantatra fa saika tany Antalaha no hanaovana ny fanondranana ireo hazo ireo. (VAROMAIZINA-Bolabolana andramena 449 tratra tao anaty kamiao efatra)
mpilalao (nitranga in-6) : Tsy midika anefa izany fa hisotro ronono sahady aho», hoy ity mpilalao mananika ny faha-36 taonany ity. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
tononkira (nitranga in-1) : Na izany aza, tsy hohadinoina ary hiverenana ihany koa ireo hira efa nahafantarana an'i Samoëla taloha ary efa narafitra tao anaty rakikira samihafa toy ny «Kalakely», «Kôfa tia», «Razily», «Poteau be»…
Vondron' (nitranga in-1) : Vondron'ireo mpivarotra mpamongady no nanolotra ity kandidà ity. (Tapany)
Mananjary (nitranga in-1) : Tamin'ny izahay nipetraka tany Mananjary no nahatsapako ny antson'Andriamanitra izay nanosika ahy hanao ny asa fanompoana an'Andriamanitra. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Botsoana (nitranga in-3) : Io fifaninanana any Tarbes io no hanokafany ny fifaninanana amin'ny taona 2014, ka tsy ahafahany miatrika ny dingan'ny fifanintsanana eo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika tapany atsimo atao any Botsoana amin'ny 5 – 12 janoary ho avy izao. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
hanokafany (nitranga in-1) : Io fifaninanana any Tarbes io no hanokafany ny fifaninanana amin'ny taona 2014, ka tsy ahafahany miatrika ny dingan'ny fifanintsanana eo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika tapany atsimo atao any Botsoana amin'ny 5 – 12 janoary ho avy izao. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
December (nitranga in-3) : com/t6sZr8nTUc
narafitra (nitranga in-1) : Na izany aza, tsy hohadinoina ary hiverenana ihany koa ireo hira efa nahafantarana an'i Samoëla taloha ary efa narafitra tao anaty rakikira samihafa toy ny «Kalakely», «Kôfa tia», «Razily», «Poteau be»…
Ayny (nitranga in-1) : — Бачаи Сако (@BachaiSako) December 17, 2013
Tsiahivina (nitranga in-1) : Na izany aza, tsy hohadinoina ary hiverenana ihany koa ireo hira efa nahafantarana an'i Samoëla taloha ary efa narafitra tao anaty rakikira samihafa toy ny «Kalakely», «Kôfa tia», «Razily», «Poteau be»…
Mahama­sina (nitranga in-1) : Ny taona 1971 izy no efa mpitandrina ka ny taona 1975 no nitantanany ny Fjkm, etsy Mahama­sina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Voamarina (nitranga in-1) : Voamarina tamin'izany fa pesta no nahafaty azy. (SOANIERANA IVONGO-Lehilahy iray indray ahiana ho matin’ny pesta)
nilaza (nitranga in-5) : Efa nilaza anefa ny Tompo fa samy mizaka ny hazo fijaliany. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
ekipa (nitranga in-3) : «Vao manomboka ny taom-pilalaovana dia tokony efa mivonona ny ekipa tsirairay amin'ny mpilalao hoentiny miady hatrany amin'ny fifaninanana afrikanina. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
Behoririka (nitranga in-5) : Misy amin'ireo taksibe sasany kosa, no tsy miditra an'Analakely intsony, fa miverin-dalana, rehefa tonga etsy Behoririka. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
pasi­tera (nitranga in-1) : Maro tsy tambo isaina rahateo ireo mpino tonga miresaka sy mila fanampiana amin-dry pasi­tera mivady. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
Boulevard (nitranga in-2) : “Any amin'ny Boulevard de l'Europe, 67ha sy Andavamamba ihany sisa no tsy dia ahitana fitohanana firy”, hoy i Benony Laza, lehiben'ny sampan-draharaha ao amin'ny Ddu. (FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA-Karazan-dalana vitsy sisa no malaladalaka azo aleha)
solonà (nitranga in-1) : Sary iray nahitàna sainam-pirenena Tajik natsipy tamin'ny tany sy nampiasaina ho solonà fandraofam-pako no niteraka korontana teo amin'ireo mpampiasa mediam-bahoaka tao Tajikistan. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Kristy (nitranga in-2) : efa nisedra ny mafy saingy tsy niamboho adidy teo amin'ny fanatanterahana ny asa masina napetrak'Andriamanitra taminy ny pasitera, Rakotomanana Jean Roussel, mpitandrina etsy amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fkjm), Atsimon'i Mahamasina. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
nodidiana (nitranga in-1) : Tao anatin'izay adidy masina niantsorohany izay dia efa namoy zanaka iray sy narary mafy ary nodidiana intelo miantoana ity mpitandrina ity. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
hamerenena (nitranga in-1) : « Manainga ny lafin-kery voakasika rehetra izahay hiara-hientana hamerenana ny fanjakana tan-dalàna, hiantoka ny fampiharana ireo zon'olombelona fototra ary hiara-hiasa ao anatin'ny fampihavanana mba hamerenena amin'ny laoniny ny fiainana politika sy ny fahasalaman'ny toekaren'ny firenena», hoy ihany ilay fanambarana. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
nampalaza (nitranga in-1) : Samia mandini- tena fa efa mirefarefa amin'ny tany, na ilay fihavanana nampalaza ny Malagasy aza. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
Shah (nitranga in-1) : ity lahatsoratra nosoratan'i Angilee Shah ho an'ny “The World” dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
Khujand (nitranga in-1) : I Ahrullo Dadaboev, ilay olona naka ny sary ka nandefa izany tany amin'ny Facebook, no nilaza fa mpamafa làlana iray no nampiasa ilay saina mba hitaterana fako tao Khujand, tanàna iray any Atsimon'ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
niantoka (nitranga in-1) : Io banky io ihany koa no niantoka manontolo ny fandehanany tany an-toerana sy ny tambin-karama nomena azy. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
hijanona (nitranga in-2) : «Mbola te hijanona eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra aho ary iriko ny hiverina ao amin'ny Arsenal. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
fandraisantsika (nitranga in-1) : Hosokafana amin'ny fandraisantsika anjara indray amin'ny «Marathon Bank Of Africa», hotontosaina any Bamako (Mali), amin'ny 13 janoary 2014 ho avy izao. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
mpiserasera (nitranga in-1) : Ny mpiserasera amin'ny Facebook ihany no nanao ny fitsarana ny sary be mpitia indrindra. (FIFANINANANA SARIPIKA-Lasan’i Bodovoahangy Ony ny “Tablette One tab 7.2”)
kandidàn' (nitranga in-1) : miady fo mafy hametraka fitoriana eo anivon'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) ny kandidà Jean Louis Robinson, kandidàn'ny antoko Avana sy ny ankolafy Ravalomanana. (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
Brezila (nitranga in-1) : Eo am-piandrasana izay mety hiafaran'ity mpilalao frantsay ity dia hisahana ny asana mpanao gazety mandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an' ny baolina kitra any Brezila izy amin'ny jona 2014, ka ny BBC no hampiasa azy amin'izany fotoana izany. (BAOLINA KITRA-Mbola ankamantatra ny ho avin’i Thierry Henry)
Faravohitra (nitranga in-1) : “Tsentsina avokoa na ireo lalana tsy dia be mpampiasa toy ny eny Ambondrona sy Faravohitra aza. (FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA-Karazan-dalana vitsy sisa no malaladalaka azo aleha)
hananan' (nitranga in-1) : Asa aloha raha tena haintsika sy tena nampitaina marina tamintsika ny foto-kevitra sy toe-panahy tokony hananan'izany kristianina izany. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
Ashton (nitranga in-1) : «Mba ho famaranana tanteraka ny fitondrana tetezamita sy ny krizy politika tamin'ny 2009 no anton'izany», hoy ny fanambarana nataon'i Cathérine Ashton, mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeanina, nivoaka omaly. (FIROSOANA AMIN’NY REPOBLIKA FAHA-IV-Manantena ny fahatongavan-tsain’ireo mpanao politika ny Vondrona Eoropeanina)
Jean (nitranga in-13) : efa nisedra ny mafy saingy tsy niamboho adidy teo amin'ny fanatanterahana ny asa masina napetrak'Andriamanitra taminy ny pasitera, Rakotomanana Jean Roussel, mpitandrina etsy amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fkjm), Atsimon'i Mahamasina. (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
hoezahina (nitranga in-1) : Ny sokajy zandriny kosa dia hoezahina ny hiverenany indray eo amin'ny vondrona 1A mba hahatanteraka ny fikasantsika hampiantrano ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny sokajy Junior amin'ny taona 2015. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
junior (nitranga in-2) : Toy izany ihany koa ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny sokajy junior any Etazonia (22 – 27 jolay) sy ny ho an'ny sokajy junior any Maraoka (10 – 14 aogositra). (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
hody (nitranga in-1) : «Avy nanatitra entana tao Behoririka izy sy ny vadiny dia handeha hody. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
Samoëla (nitranga in-3) : Mbola hanatosaka indray ny «maha-domelina» i Samoëla amin'ny seho takariva izay atolony, etsy amin'ny Piment Café Behoririka, ny zoma 27 desambra izao, manomboka amin'ny 9 ora alina. (SEHO FARANY-Hanatosaka ny «maha-domelina» indray i Samoëla)
fanazarantena (nitranga in-2) : «Tsy maintsy misafidy izahay na hanao fety na hanao fanazarantena. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
Twitter (nitranga in-1) : Tonga hatrany amin'ny Twitter ilay sary izay nahatonga an'i Mardikor hanontany hoe [tj]:
Maraoka (nitranga in-2) : Toy izany ihany koa ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny sokajy junior any Etazonia (22 – 27 jolay) sy ny ho an'ny sokajy junior any Maraoka (10 – 14 aogositra). (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
nafoy (nitranga in-1) : Nisy ny aina nafoy sy ny olona naratra vokatr'io loza io. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
ХАМИ (nitranga in-1) : Ho valin'io lahatsoratra io dia nanoratra i Ruslan Ruslan [tj]:
Sprinter (nitranga in-1) : Fiara Mercedes Sprinter no nentin'ilay Sinoa tamin'io fotoana io. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
Maputo (nitranga in-1) : Ny Liga Desportivo Muçulmana, avy any Mozambika, no hihaona amin'izy ireo any Maputo amin'ny 7, 8, 9 febroary ho avy izao, mandritra ny lalao savaranonando. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
Camille (nitranga in-1) : nanapa-kevitra ny hamonjy fodiana hiala sasatra kely any ambanivohitr'i Toliara ny jeneraly Camille Vital rehefa nosakanana tsy afaka hiazo ny nosy Maorisy, ny sabotsy lasa teo. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
mihalalina (nitranga in-1) : mihalalina ny famotorana mahakasika ireo olona nitifitra nahafaty ilay Sinoa teny Behoririka, andro vitsy lasa izay. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
Kaonfederasiona (nitranga in-3) : Miandry ny fanasana manokana avy amin'ny Kaonfederasiona afrikanina ho an'ny tenisy, nangatahin'ny federasiona malagasy ho azy hahafahany miatrika avy hatrany ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika, i Randy amin'izao fotoana izao. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
nanomezan' (nitranga in-1) : Ambaran'i Morris fa takany ny antony tsy nanomezan'ilay fikambanana Kambodziana vola azy — izy irery no hany vahiny tao, ary tsy vitan-dry zareo ny handoa ny karamany — saingy heveriny fa ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ao Londona kosa dia nàka tombony fotsiny tamin'ny hamaozatry ny tsenan'ny asa ary nanome asa ho azy, izay asa tokony hataon'olona mandray karama. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
Voices (nitranga in-2) : Miaraka amin'ny ampaham-panampian'ny vondrom-piarahamonin'ireo bilaogeran'ny Global Voices, fomba fijery maro avy amin'izao tontolo izao no hitantsika. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
mifehy (nitranga in-1) : Etsy ankilan'izay dia niantso ireo kandidà rehetra niatrika ny fifidianana filoham-pirenena na koa ny fifidianana solombavambahoaka ary ireo mpanao politika nandray anjara tamin'ny fikaroham-bahaolana tamin'ny krizy teto Madagasikara mba hanaja sy hanaraka ny lalàna mifehy ny fifidianana hatrany ny Vondrona Eoropeanina. (FIROSOANA AMIN’NY REPOBLIKA FAHA-IV-Manantena ny fahatongavan-tsain’ireo mpanao politika ny Vondrona Eoropeanina)
rainy (nitranga in-2) : Tao anatin'io fotoana lava dia lava nitantanany ny fiangonana Fjkm Atsimon'i Mahamasina io ihany koa izy no namoy ny rainy. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
navoakany (nitranga in-1) : ankoatra ny fiarahabana ny Malagasy nandray anjara am-pitoniana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka, notanterahina ny 20 desambra teo, dia nanaitra ny mpitondra tsy hanaonao foana i Etazonia, araka ny fanambarana navoakany, omaly. (FIFIDIANANA TAMIN’NY 20 DESAMBRA-Mampirisika ny manam-pahefana hamoaka vokatra azo itokisana i Etazonia)
mampahery (nitranga in-1) : ”
Saingy amin'ny fotoana toy inona ny fandaharan'asa firotsahana an-tsitrapo no mampahery ary rehefa fotoana toy inona no mitrandraka/manararaotra izy ireny. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
bilaogera (nitranga in-1) : Kanefa, bilaogera maro no nanoso-kevitra fa tokony hovaina ny sainam-pirenena sy ny famantarana nasionaly mba hitarafana tsaratsara kokoa ny fiovan-toetran'ny firenena. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Hialana (nitranga in-1) : Hialana amin'ny mety tsy fahaiza-miaraka no antony tsy dia nakana mpilalao betsaka hanatevina ny Cnaps Sport», hoy hatrany i Titi Rasoanaivo. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
Migadona (nitranga in-1) : Migadona ny Pantekôsta, dia feno Fanahy Masina tokoa isika. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
voninahitr' (nitranga in-1) : Mbola hiaro ny voninahitr'i Madagasikara ihany koa ireo atleta malagasy amin'ireo «Meeting» any Maorisy sy La Réunion ary ny hazakazaka lavitr'ezaka mifampitohy any Saint-Benoit (La Réunion). (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
Boulogne (nitranga in-1) : Taorian'ny fifaninanam-pirenena no efa niatrika fifaninanana maromaro tany Frantsa izy, teo ambany fitantanan'ny klioba Tennis Club de Boulogne Billan-court (TCBB). (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
Casa (nitranga in-1) : 15 500 no nahazo izany fanomezana Noely niarahana tamin'ny Star izany ka anisan'ireny ny Akany Avoko, ny Casa de Los Ninos Ilanivato, ny Akany NRJ, ny Akamasoa, Fikambanana Laka…
Béatrice (nitranga in-2) : Nambaran'i Béatrice Atallah, filohan'ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin'ny tetezamita (Cenit) fa tamin'ity indray mitoraka ity dia haingana kokoa tsy toy ny teo aloha ny fanangonana ireo voka-pifidianana. (FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA-Ho fantatra mialohan’ny faran’ ny taona ny vokatra feno vonjimaika)
mpilalaon' (nitranga in-1) : Hatramin'izao fotoana izao aloha dia i Chinah, mpilalaon'ny Tiavo Tem, avy any Vatovavy Fitovinany, no hany mpilalao hanatevina azy ireo. (BAOLINA KITRA-Nisafidy hanazatra tena fa tsy hanao fety ny Cnaps Sport)
efitrano (nitranga in-1) : Ankoatra izany dia isan' ireo fifaninanana iraisam-pirenena handraisantsika anjara ihany koa ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ao anaty efitrano, hatao any Pologne, amin' ny 9 marsa ho avy izao. (ATLETISMA-Hanokafana ny taom-pilalaovana ny «Marathon de Bamako»)
hanontany (nitranga in-1) : Tonga hatrany amin'ny Twitter ilay sary izay nahatonga an'i Mardikor hanontany hoe [tj]:
Nandika (nitranga in-2) : Mpanoratra Alexander Sodiqov · Nandika miora
hamaozatry (nitranga in-1) : Ambaran'i Morris fa takany ny antony tsy nanomezan'ilay fikambanana Kambodziana vola azy — izy irery no hany vahiny tao, ary tsy vitan-dry zareo ny handoa ny karamany — saingy heveriny fa ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ao Londona kosa dia nàka tombony fotsiny tamin'ny hamaozatry ny tsenan'ny asa ary nanome asa ho azy, izay asa tokony hataon'olona mandray karama. (Fandrisihana Sa Fanararaotana Ny Fandaharan'asa Firotsahana An-tsitrapo?)
hitantana (nitranga in-1) : Tetsy ankilan'izay dia mbola nanantitrantitra hatrany ny kandidà Jean Louis Robinson fa izy no ho mpandresy tamin'io fifidianana izay ho Filoha hitantana ny Repoblika faha-IV io. (KANDIDÀ JEAN LOUIS ROBINSON-Mikiry mafy hametraka fitoriana any amin’ny Ces)
Anosy (nitranga in-4) : Araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly tetsy amin'ny Hôtel Carlton Anosy, dia «maro tsy tambo isaina ireo porofo ananany mahakasika ny tsy fahatomombanan'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka, notanterahina ny zoma 20 desambra lasa teo». (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
orkesitra (nitranga in-1) : Ny tsy azo lavina kosa anefa, saika efa niomana foana amin'ny fanafanana ny fetin'ny faran'ny taona toy izao ireo orkesitra samihafa ka santionany amin' ireny ny Ambin'ts Orchestra sy ny Melodihy. (HERINANDRO MIALOHA-Mbola mangingina ireo hetsika hamaranana ny taona)
hampiantrano (nitranga in-2) : Herinandro aorian'io kosa vao hampiantrano ny lalao miverina isika. (BAOLINA LAVALAVA – AFRIKA-Hiverina hanao «Can» ny Makis vehivavy)
ahiana (nitranga in-2) : hatramin'ny omaly dia nilaza ny teo anivon' ny Polisy misahana ny heloka bevava eny Anosy, izay miandraikitra ny famotorana mahakasika ny fatin'ireo olona telo hita teny Ambohimailala, fa « tsy mbola fantatra mihitsy ny marina na mbola velona any ilay tovovavy iray ahiana ho niaraka tamin'ireo olona telo namoy ny ainy ireo na tsia. (RAHARAHA BEHORIRIKA-Betsaka ireo miseho ho mahalala ireo olona nitifitra ilay sinoa)
Roussel (nitranga in-8) : efa nisedra ny mafy saingy tsy niamboho adidy teo amin'ny fanatanterahana ny asa masina napetrak'Andriamanitra taminy ny pasitera, Rakotomanana Jean Roussel, mpitandrina etsy amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (Fkjm), Atsimon'i Mahamasina. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
nankalazan' (nitranga in-1) : Tamin'ny fahombiazana tanteraka no nankalazan'ny fanjakana ny sainam-pirenena ho toy ny ezaka hanamafisana ny toe-po tia tanindrazana. (Niteraka Korontana Tao Tajikistan Ny Fanosihosena Ny Hasin'ny Sainam-pirenena)
Nodidiana (nitranga in-1) : Ny Mpitandrina Rakotomanana Jean Roussel
Tarbes (nitranga in-1) : Io fifaninanana any Tarbes io no hanokafany ny fifaninanana amin'ny taona 2014, ka tsy ahafahany miatrika ny dingan'ny fifanintsanana eo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika tapany atsimo atao any Botsoana amin'ny 5 – 12 janoary ho avy izao. (TENNIS – «PETITS AS»-Hifaninana any Frantsa indray i Randy Randrianasoloson)
Melodihy (nitranga in-1) : Ny tsy azo lavina kosa anefa, saika efa niomana foana amin'ny fanafanana ny fetin'ny faran'ny taona toy izao ireo orkesitra samihafa ka santionany amin' ireny ny Ambin'ts Orchestra sy ny Melodihy. (HERINANDRO MIALOHA-Mbola mangingina ireo hetsika hamaranana ny taona)
teto (nitranga in-6) : “Efa narary io lehilahy io no noentin'ny fianakaviany teto amin'ny hopitalin'ny distrika (Chd) eto Soanierana. (MatoanTENY-Noelin’ny kri(z)tianina)
niantsorohany (nitranga in-1) : Tao anatin'izay adidy masina niantsorohany izay dia efa namoy zanaka iray sy narary mafy ary nodidiana intelo miantoana ity mpitandrina ity. (FIAINANA MPITANDRINA-Pasitera nisedra ny mafy, namoy zanaka sy efa nodidiana intelo)
2009 (nitranga in-1) : «Mba ho famaranana tanteraka ny fitondrana tetezamita sy ny krizy politika tamin'ny 2009 no anton'izany», hoy ny fanambarana nataon'i Cathérine Ashton, mpitondra tenin'ny Vondrona Eoropeanina, nivoaka omaly. (FIROSOANA AMIN’NY REPOBLIKA FAHA-IV-Manantena ny fahatongavan-tsain’ireo mpanao politika ny Vondrona Eoropeanina)
hamonjy (nitranga in-1) : nanapa-kevitra ny hamonjy fodiana hiala sasatra kely any ambanivohitr'i Toliara ny jeneraly Camille Vital rehefa nosakanana tsy afaka hiazo ny nosy Maorisy, ny sabotsy lasa teo. (JENERALY CAMILLE VITAL-Nody niala sasatra any ambanivohitr’i Toliara)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/24_Desambra_2013&oldid=13410120"
Voaova farany tamin'ny 24 Desambra 2013 amin'ny 21:07 ity pejy ity.